09/01/2019 - 10/01/2019 - THIT HTOO LWIN (Daily News) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ကွမ်းစားခြင်းက အာရှကနေရာတော်တော်များများမှာရော နိုင်ငံတကာမှာ တော်တော်းလေးပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတွေမှာဆိုရင် အသင့်ထုတ်ပိုးထားတဲ့ ကွမ်းထုတ်လေးတွေက ဥရောပ၊ အနောက်အမေရိကနဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးမှာပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်ကလူသန်းပေါင်းများစွာဟာ ကွမ်းစားတဲ့အလေ့အထကို တော်တော်လေးအကျင့်ဖြစ်နေကြ ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကဖင်း၊အရက်နဲ့နီကိုတင်းပြီးရင် ကွမ်းက စတုတ္ထမြောက်အစွဲလန်းစေဆုံးသောအရာအဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်။
ကွမ်းစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ကွမ်းရွက်ကြောင့်ထက် ကွမ်းသီးကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားရတာကပိုများပါတယ်။ ကွမ်းသီးကို အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမျာ စားသုံးကြပြီး ဆယ်ကျော်သက်တွေမှာပါကွမ်းသီးစားတဲ့နှုန်းတိုးလာနေပါတယ်။
ကွမ်းသီးမှာ ဆေးဘက်ဝင်တဲ့အာနိသင်အချို့လည်းရှိပါတယ်။ ကွမ်းသီးကို ကွမ်းသီးချည်းပဲ သီးသန့်စားသုံးနိုင်သလို ဆေးရွက်ကြီး၊ အခြားရောစပ်ထားတဲ့ ဆေးမှုန့်တွေ၊ကွမ်းသီးစိတ်တွေကို ကွမ်းရွက်ထဲထည့်ပြီးတော့စားသုံးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
ကွမ်းသီးကို schizophrenia လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ဝေဒနာတွေကို ကုသရာမှာအသုံးပြုနိုင်သလို glaucoma လို့ခေါ်တဲ့ မျက်စိဝေဒနာကို ကုသရာမျာလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းသီးက အစာချေဖျက်မှုကိုလည်းကောင်းမွန်အောင် အထောက်အကူပြုပါတယ်။အချို့ကွမ်းသီးကို ပင်မအာရုံကြောစနစ် (CNS) ကိုတက်ကြွစေဖို့အတွက် အပန်းဖြေတဲ့ဆေးဝါးတစ်ရပ်အနေနဲ့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
ကွမ်းသီးမှာပါတဲ့ ဓာတုဗေဒဓာတ်တွေက ဦးနှောက်နဲ့ ပင်မအာရုံကြောရဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
မြင်သာတဲ့ ကွမ်းစားခြင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတစ်ခုက သွားတွေကို အရောင်ပြောင်းစေတာနဲ့ ကွမ်းသီးကြောင့် လက်တွေမှာ အရောင်စွန်းတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကွမ်းစားတာက ဆေးရွက်ကြီးတွေ မဂ္ဂနီဆီယမ်တွေမပါဝင်ရင်တောင်မှ အစာရေမြို ကင်ဆာကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းသီးမှာပါတဲ့ alkaloids နဲ့ polyphenols တို့ကကင်ဆာရောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းစားပါများတဲ့အခါ ခရိုမိုဆုန်းတွေ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားဖြစ်နိုင်ခြေများလာပြီး ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြကိုပုံမှန်ထက်ပိုများစေပါတယ်။ ကွမ်းစားတဲ့အခါ ထည့်စားလေ့ရှိတဲ့ ထုံးနဲ့ကွမ်းသီးတို့ပေါင်းစုသွားတဲ့အခါမှာလည်း ခံတွင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးလာစေပါတယ်။
ကွမ်းစားတဲ့အခါမှာပါတဲ့ ကွမ်းသီးကသွားဖုံးတွေကို ထိခိုက်စေပြီး ခံတွင်းအနာတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။ ကွမ်းသီးက သွားဖုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
ကွမ်းသီးမှာပါတဲ့ စိတ်တက်ကြွစေတဲ့ဓာတ်က ကဖင်းနဲ့နီကိုတင်းတို့မှာပါတဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ တူပြီးစွဲလမ်းစေတတ်ပါတယ်။ ကွမ်းသီးစားလိုက်တဲ့အခါ စိတ်တက်ကြွမှုနဲ့စွမ်းအင်ပြည့်ဝ သွားသလိုမျိုးခံစားလိုက့်ပြီး ထပ်ကာထပ်ကာစားချင်စိတ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းစားတာကြောင့် စကားပြောဆိုရာမှာအခက်ကြုံတာ၊ အပူဒဏ်၊အအေးဒဏ်နဲ့ အရသာပြင်းတာတွေကို ခံနိုင်စွမ်းလျေ့ကျတာ၊ သွေးတိုးတာ၊ စိတ်ဂနာမငြိမ်တာ၊ စိတ်ဆိုးလွယ်တာ၊ စိတ်ဖိစီးတာ၊ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းလျော့နည်းလာတာ။ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်တာမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဆေးတွေကို ကွမ်းနဲ့ကွမ်းသီးစားသုံး တာကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းစားတာကြောင့် ကျန်မားရေးကိုထိခိုက်စေတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပေမယ့်လည်း ကွမ်းဝါးတာကြောင့် ရနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတစ်ခုကိုလည်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ခံတွင်းခြောက် နေမယ်ဆိုရင် ကွမ်းဝါးလိုက်ပါ။ ကွမ်းမှာပါတဲ့ ကွမ်းသီးက တံတွေးထွက်စေနိုင်တာ ကြောင့် ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခံတွင်းခြောက်တာကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ်လောက်ပဲ စားပေးသင့်ပါတယ်။
ကွမ်းကိုအကြာကြီးငုံထားတာမျိုး၊ အများကြီးစားတာမျိုးက မကောင်းပါဘူး။ကွမ်းသီးမှာပါတဲ့ ဓာတုဓာတ်အချို့က ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပြီး အချို့ အဆိပ်ဖြစ်စေပါတယ်။
ကွမ်းသီး ၈ ဂရမ် ကနေ ၃၀ ဂရမ်အထိစားသုံးမယ်ဆိုရင်သေစေနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းဝါးတာက ပါးစပ်၊နှုတ်ခမ်းတွေကို နီစေတဲ့အပြင် ဝမ်းတွေကိုလည်းအနီရောင်ပြောင်းစေပါတယ်။ ကွမ်းစားရာမှာပါတဲ့ ကွမ်းသီးက အော့အန်တာ၊ဝမ်းလျှောတာ၊သွားဖုံးတွေမှာ ရောဂါဖြစ်တာ၊ တံတွေးအထွက်များတာ၊ ရင်ဘတ်အောင့်တာ၊နှလုံးခုန်မမှန်တာ၊သွေးပေါင်ကျတာ၊အသက်ရှုနှုန်းနှေးတာ၊ အသက်ရှုနှုန်းမြန်တာ၊ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်တာ၊ကိုမာ ဝင်တာနဲ့ သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်တာမျိုးတွေ ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ၊ နို့တိုက်မိခင်တွေအနေနဲ့ ကွမ်းနဲ့ကွမ်းသီးစားတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ကင်ဆာဖြစ်တာနဲ့ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်တာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းသီးက ပင်မအာရုံကြောစနစ်ကိုထိခိုက်စေပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို အန္တရာယ်ရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းသီးမှာပါတဲ့ ဓာတုဓာတ်တွေက နို့ကနေတဆင့် ကလေးဆီကိုရောက်သွားနိုင်ပြီး ကလေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းယာမှာပါတဲ့ ကွမ်းသီးက နှလုံးခုန်နှုန်းကိုနှေးစေနိုင်တာကြောင့် နှလုံးခုန်နှုန်းနှေးတဲ့ အခံရှိသူတွေမှာ ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။
အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းတွေမှာ အနာတွေဖြစ်စေနိုင်ပြီး ရှိပြီးသားအနာတွေကိုလည်း ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းသီးက အတက်ရောဂါကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
ကွမ်းစားတာက ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း (Urinary tract obstruction) ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ကွမ်းစားတာက ဆီးချိုနဲ့နှလုံးရောဂါလိုမျိုး နာတာရှည်ရောဂါတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းစားတာကြောင့် ဆဲလ်တွေထဲက ဒီအန်အေကို ပျက်စီးစေပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးစေနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းစားတဲ့ အချိန်ကာလအတိုင်းအတာနဲ့ စားသုံးတဲ့ပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး ခံတွင်း၊ လည်ချောင်းနဲ့ အစာရေမြိုကင်ဆာတွေ ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကွမ်းနဲ့ကွမ်းသီးက အတန်အသင့်ပမာဏလောက်စားသူံးရင် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုး ရနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အလွန်အကျွံစားသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်းထန်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကွမ်းယာနဲ့ကွမ်းသီးကိုစားသုံးရတာ နှစ်သက်သူတွေအနေနဲ့လည်း ချင့်ချိန်စားသုံးနိုင်စေလိုပါတယ်။
ရေးသားသူ - Aye Thi Mon
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ - Dr. Kaung Thar
သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်သင့်သော အဓိက အကြောင်းရင်း လေးချက်
ဆေးလိပ်က ကောင်းကျိုးများစွာ သယ်ဆောင်လာတယ်လို့ လူတော်တော်များများ ပြောတတ်ကြတယ်။ ဆေးလိပ်က သင့်ကိုတွေးခေါ်နိုင်ဖို့ ကူညီတယ်။ စိတ်ခံစားချက်ကို ပိုကောင်းစေတယ်၊ ခေါင်းရှင်းစေတယ်၊ စိတ်ဓါတ်ကျဝမ်းနည်းနေတာတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ကူညီပေးတယ် စသဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီလိုကောင်းနေပုံပေါ်အောင် ဆေးလိပ်မှာပါတဲ့ နီကိုတင်းက သင့်စိတ်ကို လှည့်စားနေတာပဲဖြစ်တယ်။ ဆေးလိပ်က ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးပဲပေးတယ်ဆိုတာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါဘူး။ သင်မကောင်းဆိုးဝါးဆေးလိပ်ကို လက်ကလွှတ်ချလိုက်သင့်တဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း လေးချက်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အထွေထွေခွဲစိတ်ဆရာဝန်များ၏ စကားအရ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် အဆုတ်၊ အသည်း၊ အူမကြီး အပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအားလုံးနီးပါးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာ ပုံစံ ၁၅မျိုးနဲ့လည်း ဆေးလိပ်သောက်ြခင်းက ဆက်နွယ်နေပါတယ်။ သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဆေးလိပ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို စတင်ပြုပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ အသက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်မှာ ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့ လူတွေဟာ ဆေးလိပ်မဖြတ်တဲ့လူတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်နေတဲ့ရောဂါတွေကြောင့် သေဆုံးနှုန်း ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက် လျော့နည်းသွားတာကို သက်သေအထောက်အထားနှင့်တကွ တွေ့ရှိရပါတယ်။
ယခုဆိုလျှင် သင်သောက်နေတဲ့ဆေးလိပ်က သင့်ပိုက်ဆံတွေကို မီးရှို့ပစ်နေတယ်ဆိုတာကို သင်သတိထားမိနေလောက်ပါပြီ။ တချို့ နေရာတွေမှာဆိုလျှင် ဆေးလိပ်တစ်ဘူးကို သောင်းချီပြီးပေးရတာမျိုးတောင် ရှိပါတယ်။ တစ်ဘူးကို ၅၀ဝ၀ ကုန်တယ်ပဲ ထားပါတော့ တစ်ရက်တစ်ဘူးသောက်ခြင်းက သင့်ကိုနှစ်စဉ်ငွေ ၁၈၂၅၀ဝ ကျပ်လောက် ကုန်ကျစေမည်။ ဒီသတင်းက သင့်ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေကို တော်တော်ပင် အထိနာစေသည်။ ဒီသတင်းဆိုးကို သေချာပေါက် သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို သိစေလိုမည်မဟုတ်ပေ။ သို့ဖြစ်၍ သင်ဆေးလိပ်တစ်ဘူးကို ကောက်မယူခင် ထိုဆေးလိပ်ကိုဝယ်မယ့်ပိုက်ဆံကို စုဆောင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အခြားဘာတွေအများကြီးလုပ်လို့ ရနိုင်လဲဆိုတာလေးကို တစ်ခေါက်လောက် တွေးကြည့်ပေးပါ။
သင်ဆေးလိပ်သောက်လိုက်လို့ ထိခိုက်သွားနိုင်တဲ့ အပြစ်မရှိတဲ့ သင်သင့် ဇနီး/ယောကျာ်း၊ သားသမီးနှင့် သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတွေ အကြောင်းကိုတွေးကြည့်ပါ။ လေ့လာမှုများအရ ဆေးလိပ်သောက်သူနဲ့နေရတဲ့ ကလေးတွေမှာ အဆုတ်အအေးမိခြင်း၊ နားပိုးဝင်ခြင်းများ ပိုမိုဖြစ်ပွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ဆေးလိပ်သောက်သောမိခင်မှ မွေးဖွားလာသော ရင်သွေးငယ်လေးများသည် ပေါင်မပြည့်၊ လမစေ့မွေးဖွားနိုင်ချေနှုန်း ပိုမိုမြင့်မားပြီး မွေးပြီး တစ်နှစ်အောက်မှာ ရုတ်တရက်သေဆုံးနိုင်ချေလည်း များလေသည်။ အကယ်၍ သင်သာ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်ရုံနှင့် သင်ကိုယ်တိုင်ရော သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများပါ လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းသောလေကို ရှူရှိူက်ခွင့် ရသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးလိပ်ကင်းစင်သော သာယာလှပသည့်ဘဝကို သင့်လက်နှင့် တည်ဆောက်လိုက်ပါ။
သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်လျှင် သင့်အသားအရေနှင့် သွားများသည် ပိုပြီးကြည့်ကောင်းလာကာ သင်ပိုပြီးငယ်ရွယ်နုပျိုသောအသွင်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဇူးရစ်ရှ် တက္ကသိုလ်က လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ဆေးလိပ်သောက်သူနှင့် မီးခိုးရောင်ဆံပင်ကြား ဆက်နွယ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ဆေးလိပ်မှာပါတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းများက အမွေးအိတ်လေးတွေမှာ ရှိတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်သာမက မျက်နှာမှာပါရှိတဲ့ သွေးကြောလေးတွေကို ကျဉ်းစေကာ အသားအရေ ဝါဝါဖျော့ဖျော့အရောင်ပြောင်းစေသည်။ ထို့ပြင် အသားအရေ တင်းရင်းကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်စွမ်းကိုလည်း ပျက်စီးစေသည်။ အသက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင်လူများကို ဖြစ်စေသောနည်းတူ အသက်နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်တွေမှာလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုကတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တာနဲ့ နှစ်ပတ်အတွင်းမှာတင် အိုမင်းရင့်ရော်နေတဲ့ မျက်နှာကိုပြောင်းပြန် ပြန်လှန်ပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းက ဉာဏ်ရှိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်သင့်တဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အရေးကြီးဆုံးက သင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ယခုပဲစတင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ အကယ်၍ ကြိုးစားရခက်ခဲနေရင် ဆရာဝန်ဆီကနေ အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - Dr. K Zin Thwe
ဖားကန့်၌ ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေသူတစ်ဦး ဦးခေါင်းကျောက်တုံးထိမှန်၍ ရေကန်ဟောင်းအတွင်း ပြုတ်ကျပျောက်ဆုံး
ဖားကန့် စက်တင်ဘာ ၃၀
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စု ငိုးပင်းကျေးရွာအနီးရှိ ကျောက်မျက်လုပ်ကွက်ရေကန်ဟောင်းတွင် စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ညနေ ၄ နာရီခန့်က ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေနေသူတစ်ဦး၏ ဦးခေါင်းပေါ်သို့ ကျောက်တုံးထိမှန်ကာ ရေကန်ဟောင်းအတွင်း ပြုတ်ကျပျောက်ဆုံးနေကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ညနေ ၄ နာရီခန့်က ဖားကန့်မြို့နယ် လုံးခင်းကျေးရွာအုပ်စု ငိုးပင်းကျေးရွာအနီးရှိ မြဥယျာဉ်ကုမ္ပဏီနှင့် မြစ်ဆုံဧရာကုမ္ပဏီ ရေကန်ဟောင်းအနီးတွင် ရေမဆေးကျောက် ရှာဖွေနေသူ နိုင်လင်း(နေရပ်လိပ်စာစိစစ်ဆဲ)သည် ကျောက်ရှာဖွေနေစဉ် အမြင့်ပေ(၃၀)ခန့်မှ ကျောက်တုံး(ဒေသအခေါ် မောက်တုံး)တစ်တုံးပြုတ်ကျ၍ ဦးခေါင်းထိမှန်ကာ အနက်ပေ(၂၀၀ ခန့်)ရှိ ကျင်းဟောင်းရေကန်အတွင်းသို့ ပြုတ်ကျပျောက်ဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရေကန်အတွင်းပြုတ်ကျပျောက်ဆုံးနေသူကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် များ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ငိုးပင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မုံရွာ မှ အိန္ဒိယ အထိ နင်းမည့် ​​တစ်​ကိုယ်​​တော်​ စက်​ဘီးသမားခရီးစဉ်​ စတင်
မုံရွာမှ စတင်​၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓဂါယာ အထိ စီးနင်းမည့်​ တစ်​ကိုယ်​​တော်​စက်​ဘီး သမား၏ ခရီးစဉ်​မှာ ယ​နေ့ စတင်​ပြီဖြစ်​သည်​။
ယင်းခရီးစဉ်​မှာ အသွား အပြန်​ မိုင်​ ၂၄၀၀ ​ကျော်​ ရှိသည်​။
"စက်ဘီးကို၂ နှစ်လောက်ကစပြီး တစိုက်မတ်မတ်စီးလာတာပါ၊ကြုံတဲ့နေရာ ရောက်တဲ့နေရာ တဲထိုးအိပ်မှာပါ၊မိုးကာတဲပါတယ်၊စက်ဘီးအတွက်အပိုပစ္စည်းတွေလည်းပါပါတယ် "ဟု တစ်ကိုယ်​​တော်​ စက်​ဘီးသမား ကိုညီလှိုင် ကပြောသည်။
လူငယ်များအားကျပြီး တိုင်းတစ်ပါးကိုစွန့်စားသွားလာလိုသည့်အားကစားစိတ်ဓါတ်များကိန်းအောင်းလာစေရန်တစ်ကိုယ်တော်စက်ဘီးစီးရခြင်းဖြစ်​သည်​ ဟု ၎င်း၏ ရည်​ရွယ်​ချက်​ အားရှင်းပြသည်​။
၎င်း ခရီးစဉ်​ကို တစ်​လခွဲခန့်​ကြာမည်​ဟု ရည်​မှန်းထားပြီးမုံရွာ-ယာကြီးလမ်းအတိုင်းတမူး-မိုးရေး-အင်ဖာ လမ်း​ကြောင်းအတိုင်း သွားမည်​ဖြစ်​သည်​။
ဆန္ဒပြပြီးနောက် ၀ါးစိမ်းတောင်ဒေသ သတ္ထုသိုက်ရှာဖွေခွင့် တိုင်းအစိုးရ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်း
၀ါးစိမ်းတောင် ဒေသခံတောင်သူများ မုံရွာမြို့တွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ဆန္ဒပြပြီးနောက် ယင်းဒေသတွင် သတ္ထုသိုက်စမ်းသပ် ရှာဖွေခွင့် ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းသဘောထားမှတ်ချက်အား စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရမှ ပယ်ဖျက်လိုက်သည်။
ဒေသခံများ၏ သဘောထားကို ရှေးရူ၍ ယနေ့ပြုလုပ်သော အစိုးရအဖွဲ့ ကတ်ဘိနက် အစည်းအဝေး (၂၂/၂၀၁၉)အရ ပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး သံယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့လည်း ပြန်လည် သဘောထားပေးပို့ပြီးဖြစ်သည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
“အရင်ကလည်း ဆိုင်းငံ့ ထားဖူးပါတယ်၊ ခုဟာလည်းတူးမှာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စိုးရိမ်ဖို့မရှိပါဘူး၊ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာလည်း ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းပြောတာပါ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒပါ “ဟု တိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ စည်ပင်သာယာရေး ၀န်ကြီးဦးမြင့်ကြည်က ပြောသည်။
မြန်မာ-ယန်စီ ကုမ္မဏီမှ ကြေးစင်တောင် ကြေးနီစီမံကိန်း၏ တိုးချဲ့လုပ်ကွက်အဖြစ် ဆားလင်းကြီး၊ယင်းမာပင်၊ကနီမြို့နယ်ဝန်းကျင် ၀ါးစိမ်းတောင်ဒေသတွင် ကြေးနီနှင့်ဆက်စပ် သတ္ထုရှာဖွေရေး ဖြစ်နိုင်စွမ်းအား မြေဧက တစ်သိန်းကျော်တွင် ရှာဖွေခွင့် လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
၄င်းတို့ထဲမှ ဧက ၂သောင်းကျော်တွင် ရှာဖွေခွင့်ပေးပြီး ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းစစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရမှ သံယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၄င်းမှတ်ချက်အား မကျေနပ်၍ ဒေသခံအင်အား ၈၀၀ ကျော်သည် မုံရွာမြို့သို့ ယနေ့နံနက်ပိုင်းက ချီတက်လာ၍ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
နမ့်စန်မြို့ရှိ နမ့်တိန်းချောင်းအတွင်း ရေနစ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လူငယ် ၂ဦး ကို သေဆုံးလျက် ပြန်လည်တွေ့ရှိ
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ နမ့်စန်မြို့၊ နမ့်တိန်းချောင်းရှိ နမ့်ဟူးလှေဆိပ် အနီးမှာ စက်တင်ဘာလ၂၈ ရက်၊ ညနေပိုင်းက ရေနစ်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လူငယ်၂ဦးကို စက်တင်ဘာလ၂၉ရက်၊ ညနေပိုင်းက သေဆုံးလျက် ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ မေတ္တာရှင်နာရေးကူညီမှုအသင်းထံမှ သိရပါတယ်။
အဆိုပါ လူငယ်၂ဦးက နမ့်ဟူးလှေဆိပ်အနီးရှိ သဲသောင်ပြင်မှာ ဘောလုံးကန်နေစဉ် နမ့်တိန်းချောင်းအတွင်း ဘောလုံးကျသွားတဲ့အတွက် ချောင်းအတွင်းဆင်းပြီးဆယ်ယူရာမှ ရေနစ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
"ရေနစ်တာက ၂၈ရက်ကပါ။ အလောင်းကို မနေ့ညနေကမှပြန်တွေ့ တာ။သူငယ်ချင်း၃ယောက် ဘောလုံးကန်နေတုန်း ဘောလုံးကျသွားလို့ တစ်ယောက်က ဆင်းဆယ်တာ။အဲဒီအချိန်မှာ ချောင်းကလည်း ရေကြီး နေတော့ မျောသွားတယ်။အဲဒါကြောင့် နောက်တစ်ယောက်က ဆင်းဆယ်တဲ့အချိန်မှာ ၂ယောက်လုံးမျောသွားတာ။ကျန်တဲ့တစ်ယောက် ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြီး ဝိုင်းရှာကြတာ။ရေက နစ်သွားတော့ ရှာလို့မရတော့ဘူး။ ၂၉ရက်နေ့ တစ်နေ့လုံးရှာကြတာ ညနေပိုင်းမှပြန်တွေ့တာ။ ရေနစ် တဲ့နေရာနဲ့ ကိုက်၃၀၀အတွင်းလောက်မှာ အလောင်းပြန်တွေ့တာပါ"လို့ မေတ္တာရှင်အသင်းမှ ဦးနေဇော်နိုင်က ရွှေတြိဂံသတင်းဌာနကို
ယင်းရေနစ်သေဆုံးသွားတဲ့လူငယ်၂ဦးမှာ ညောင်ဦးမြို့မှ နမ့်စန်မြို့ကိုအလုပ်လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသူ အောင်ဇော်ဖြိုး(၁၇နှစ်)နဲ့ တံတားဦးမြို့မှ နမ့်စန်မြို့ကိုလာရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ နေထက်လင်း(၂၂ နှစ်)တို့ဖြစ်တယ်လို့ ဦးနေဇော်နိုင်က ပြောပါတယ်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး နမ့်စန်မြို့မရဲစခန်းမှာ သေမှုသေခင်းဖြစ်စဉ် ၁၂/၂၀၁၉အရ အမှုရေးဖွင့်ထားပြီး အသေးစိတ်ကို စစ်ဆေးလျက် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တကျော့ပြန်ကူးစက်ပြန့်ပွါးလာတဲ့ ဆင်တုပ်ကွေး သျှမ်းပြည်မှာအဖြစ်များ
ဆင်တုပ်ကွေး ၊ မျောက်တုပ်ကွေးလို့ မြန်မာနိုင်ငံက အမည်ပေးခေါ်ဆိုတဲ့ ကိုက်ခဲယားယံမှုတွေနောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်စေတဲ့ ချိကွန်းကန်းယား တုပ်ကွေးမျိုးကို ယခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားကူး စက် ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။ သျှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာလည်း ဒီတုပ်ကွေးရောဂါအဖြစ်များနေပါတယ်။ ဒီတုပ်ကွေးအတွက် ကာကွယ်ဆေး သီးသန့် မရှိသေး ဘူးလို့လည်းကျန်းမာရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒီရောဂါကူးစက်ခံရရင် လူ့အသက်အတွက် ဘယ်လောက် အန္တရယ်ပြု နိုင်ပါသလဲ ။
ချိကွန်းကန်းယား လို့ခေါ်တဲ့ တုပ်ကွေးရောဂါဟာ ကူးစက်လွယ်တဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ကိုက်ခဲမှု နဲ့ယားယံမှုပြသနာကြောင့် ဒီတုပ်ကွေးကို ဆေးကုသမှုထက်ကြိုတင် ကာကွယ်သင့်တယ်လို့ ဒေါက်တာနန်းကျိန်နွမ်ဖောင်က ပြောပါတယ်။
“ချိကွန်ကန်းယားလို့ခေါ်တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါက ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတဲ့ အေးဒီးစ် ခြင်အမျိုးအစားပေါ့နော်။ အဲဒီခြင်မ ကနေပြီးတော့လူကိုကိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့တံတွေးကနေတဆင့်လူတွေရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲကို ရောဂါပိုးဝင်လို့ ကူးစက်ခံရခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက ခြင်ကနေကူးစက်တယ်ဆိုတော့ ခြင်ကိုက်မခံရအောင်နေရမှာ ပေါ့နော်။ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့ဟာတွေက လူတွေရဲ့ကိုယ်ခံအား ကျနေချိန်မှာ ၀င်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တော့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်အောင် အမြဲသတိထားပြီးတော့မှ နေထိုင်ရမယ်။ အဟာရမျှတအောင်စားမယ်။ အခုဆိုရင် ချိကွန်ကန်းယားဗိုင်းရပ်စ်ကိုပျောက်စေ တဲ့ကာကွယ်ဆေးဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ အဲတာကြောင့်မဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီး နေတာကတော့အကောင်းဆုံးပါ။”
ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဝင်ပြီးနောက်ခန္ဓါကိုယ်ဟာ ဆင်နင်းတယ်ထင်ရအောင်ကိုက်ခဲနာကျင်မှုတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ယားယံပူစပ်တဲ့ အနီအစက်တွေပါထွက် အမြဲကုတ်ချင်နေတဲ့အတွက် မျောက်တုပ်ကွေးလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။ ဆင်တုပ်ကွေး ရောဂါလက္ခဏာကို ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ တောင်ကြီးမြို့က စိုင်းကောန်းလျန်းက အခုလိုပြောပါတယ်။
“ညလည်းအိပ်လည်းမပျော်ဘူး ပူလည်းပူတယ်။ စောင်မခြုံရင်အေးတယ် စောင်ခြုံရင်ပူတယ်။ ချွေးလည်းထွက်တယ်။ စောင်ဖယ် လိုက်ရင်အေးတယ် အဲလိုတွေခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ တကိုယ်လုံးကိုက်ခဲတယ်။ စားလည်းမရဘူး။ ကျနော်ဆင်တုပ်ကွေးမိမှန်းလည်းမသိဘူး။ ကျနော်ဆေးခန်းသွားပြမှ ဆင်တုပ်ကွေးမိတာ သိရတာ။ ဆင်တုပ်ကွေးပျောက်တော့ အနီအစက်တွေတကိုယ်လုံးထွက်တာ။ မျက်နှာတွေရောဘဲ။ ဆရာဝန်ပြောတယ် ဆင်တုပ်ကွေးကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ အနီရောင်အစက်က စိတ်မပူရပါဘူးတဲ့။”
ကိုယ်ခံအားအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ရောဂါဟာ ၅ ရက်ကနေ တပတ်အထိ ကြာမြင့်မှပျောက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ရောဂါကြောင့်လူနာသေဆုံးတာတော့မရှိဘူးလို့ ဒေါက်တာနန်းကျိန်နွမ်ဖောင် ကပြောပါတယ်။
“ချိကွန်ကန်းယားကြောင့် လူနာသေဆုံးရတာတော့မရှိဘူး။ အဲ့ရောဂါကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာထဲကနေပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကိုယ်ခံအားအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားတတ်တဲ့အခါကျတော့ သွေးပေါင်ကျတာတွေဖြစ် တတ်တယ်။ ကြွက်သားတွေအရမ်းနာကျင်တာဖြစ်တတ်တယ်။ အနာမခံနိုင်လို့ရှော့ခ်ရတာတို့ သွေးပေါင်ကျတာကြောင့် ရှော့ခ်ရတာတို့ အဲလိုမျိုးတော့ရှိတယ်။ အဖျားအရမ်းတက်ရင် ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးရတတ်တယ်။ လိုအပ်လို့ရှိရင် ဓါတ်ဆားဓါတ်တွေကို ပြန်ဖြည့်ဖို့တဲ့ ပုလင်းကြီးချိတ်တာတွေရှိရမယ်။ အဓိကအရေးကြီးတာက တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုပြသင့်ပါတယ်။ ”
ရောဂါကူးစက်ခံရမှုကနေကင်းဝေးအောင်ဆိုရင်တော့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကနေ ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်နေတာကို လူထုကနေလက်တွဲပူးပေါင်းပြီး ကာကွယ်ရင်တော့ ထိရောက်မှုရရှိမှာလို့လည်း ဒေါက်တာကျိန် ကပြောပါတယ်။
“အိမ်မှာနေရင်လည်း အဝတ်ကိုအရှည်တွေဝတ်မယ်။ ခြင်လိမ်းဆေးတွေလိမ်းနိုင်တယ်။ ညအိပ်တဲ့အခါမှာလည်း ခြင်ထောင်လေးထောင်ပြီးအိပ်မယ်။ ကိုယ့်ကလေးတွေကိုကျောင်းတွေမှာခြင်ကိုက်မခံရအောင် အကျီလက်ရှည်လေးတွေဝတ်ပေးမယ်။ ခြင်လိမ်းဆေးတွေလိမ်းပေးမယ်။ သူက လူနဲ့နီးနီးနားနားရှိ ရေကြည်တွေမှာပေါက်ဖွားတဲ့အတွက် ခြင်နှိမ်နင်းနည်းတွေဖြစ်တဲ့ ဖုံး၊သွန်၊လဲ၊ စစ် ဆိုတဲ့နည်းသုံးရပါမယ်။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကနေပြီးတော့မှ သေချာကြပ်မတ်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ”
လက်ရှိမှာတော့ ရောဂါ ကူးစက်ခံရတဲ့မြို့တွေဆိုရင် အိမ်တိုင်းနီးပါး ဖြစ်ပွါးကြပြီး ရောဂါကူးစက်ခြင်းမရှိတဲ့မြို့တွေဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမရှိကြောင်း မိုင်းပန်ပြည်သူ့ဆေးရုံက ဆရာမ ယိင်းဆီနွန်းက အခုလိုပြောပါတယ်။
“မိုင်းပန်မှာတော့ ရောဂါကူးစက်မှု မရှိသလောက်ပါဘဲ။ အဖြစ်များတာက လင်းခေးမှာပါ။ လင်းခေးခရိုင်ဆေးရုံဆိုရင် လူနာ ၄ ပုံ ၃ ပုံက ချိကွန်ကန်းယားတုပ်ကွေးလူနာတွေလို့ကျမတို့ကြားသိရပါတယ်။”
ချိကွန်ကန်းယားဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အာရှ၊ အာဖ ရိက၊ ဥရောပနဲ့အမေရိကတိုက်တို့ရှိ နိုင်ငံ ပေါင်း ၆၀ ကျော်မှာဖြစ်ပွားပါတယ်။ အာရှ တိုက်၊ အာဖရိကတိုက်နဲ့ အိန္ဒိယတိုက်တွေမှာ ဖြစ်ပွားမှုအများဆုံး ဖြစ် ပြီး ခြင်ကျား ပေါက်ဖွားမှု များပြား တဲ့ နေရာတွေမှာ ရောဂါဖြစ်ပွါးဖို့အခွင့်ပိုများတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ၈ နှစ်တာကာလမှာ တကျော့ပြန်လည်ကူးစက်ပြန့်ပွါးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း ကျန်းမာရေးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
အဆိုပြုလွှာမူကြမ်းမှာ သမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အမျိုးအစားပေါင်း ၂၇ မျိုးကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်
ရခိုင်ပြည်နယ်က ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် အဆောက်အုံတွေ အများအပြားရှိနေတဲ့ မြောက်ဦးမြို့ကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်လာဖို့ ယူနက်စ်ကိုအသိအမှတ်ပြုရေး အဆိုပြုလွှာမူကြမ်းကို စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့က တင်သွင်းလိုက်ပြီလို့ မြောက်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်သန်းကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီအဆိုပြုလွှာမူကြမ်းမှာ သမိုင်းဝင်ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အမျိုးအစားပေါင်း ၂၇ မျိုးကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပြီး နန်းတော်ကုန်း၊ တံတိုင်း၊ ကျုံး၊ ပိဋကတ်တိုက်၊ စဥ့်ထည်၊ စဥ့်ဖို၊ ညီလာခံသဘင်ကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့ စပါးကျီတွေ စတဲ့အမွေအနှစ်တွေပါဝင်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
ဒီအဆိုပြုလွှာကို ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကနေ စတင်ပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပြီး နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းပြုစုခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ ဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့် အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်သန်းကပြောပါတယ်။
" ယူနက်စကိုက လည်းဇန်နဝါရီလောက် နောက်ဆုံးထားပြီး မေးမှာတွေရှိတယ် သူတို့လိုအပ်တာတွေကိုအချိန်နဲတပြေးညီ ပြန်ဖြေရမှာပါ"လို့ ဒေါ်ခင်သန်းကပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့ဟာ ရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်တွေ အများပြားစုစည်းတည်ရှိနေတဲ့ ဒေသတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အဲ့ဒီသမိုင်းဝင်အမွေအနှစ်တွေဟာ ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းပြီး၊ သဘာဝဘေး ဒဏ်တွေကြောင့် မကြာခဏ ပြိုပျက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။
မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်း စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ ကလည်း မြောက်ဦးမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ လက်ကောက်ဈေး ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မြို့အဝင် မောက်တော်တံခါးဟာ မိုးကြီးပြီးပြိုပျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီပြိုပျက်မှုကြောင့် တံခါးရဲ့ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာ ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ကော်မတီကပြောပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း မြောက်ဦးကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်ဖြစ်လာဖို့ ယူနက်စကို အသိအမှတ်ပြုခံရရေးအတွက် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်နေကြတာဖြစ်ပြီး အခုလိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေ ပြိုကျပျက်စီးမှုတွေရှိနေ ပေမယ့် ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ မြောက်ဦး ရှေးဟောင်းသုတေသဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသန်းထိုက်က ပြောပါတယ်။
မြောက်ဦးယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေအတွင်းက နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် ၆၀၀ နီးပါးကြာမြင့်နေတဲ့ သဘာဝဘေးဒဏ်ခံ အမွေအနှစ်တွေကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာ ငွေကြေးအင်အားမလုံလောက်မှု၊ ဝန်ထမ်းမလုံလောက်မှုတွေကြောင့် အခုလို ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာသန်းထိုက်ကပြောပါတယ်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာ ရှင်တွေအပိုင်းက ပိုအရေးကြီး
ယူနက်စကို အသိမှတ်ပြုပုဂံမှာ ဝန်ထမ်းအင်အား ၅၀၀ ကျော်ရှိပြီး မြောက်ဦးမှာ ၃၆ ယောက်သာရှိတဲ့အတွက် ဝန်အားနဲ့ လူအင်အားမျှတာတွေလည်းရှိနေပြီး မြောက်ဦးမှာ လာရောက် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသန တာဝန်ခံတွေအနေနဲ့လည်း ရခိုင်သမိုင်းကို နားမလည်တာကြောင့် ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေရတာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါ်ခင်သန်းက ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးတွေကို ရရှိလာပေမယ့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာ ရှင်တွေအပိုင်းက ပိုမိုအရေးကြီးပြီး မပြုပြင်နိုင်တဲ့အတွက် မြေပြင်ပေါ်မှာ ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ အမွေအနှစ်တွေ အများကြီး ရှိနေတယ်လို့ ဒေါ်ခင်သန်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
"ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုတဲ့ စီမံကိန်းတွေကိုရေးဆွဲပြီးတော့ မြောက်ဦးမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းတွေခင်းလာတယ်။ ဒီလမ်းတွေကိစ္စကို ကျွန်မတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲထားတာမရှိတော့မြောက်ဦးကိုဘယ်လိုထိန်းမလဲ။ လူတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေ သဟဇာတဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ အစီအမံတွေမရှိတဲ့အတွက် စိတ်ပူမိပါတယ်။"လို့ ဒေါ်ခင်သန်းကပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုတင်သွင်းလိုက်တဲ့ အဆိုပြုလွှာမှုကြမ်းဟာ ပထမပိုင်းသာဖြစ်ပြီး နောက်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အမွေအနှစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ထပ်မံပြီးတင်သွင်းသွားဖို့ရှိနေသေးတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ လက်နက်ကြီးတွေ ကြောင့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံချို့မှာ ထိခိုက်အက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေ
ဒါ့အပြင် တချို့နေရာတွေမှာလည်း ပျက်စီးမှုတွေရှိနေပြီး လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာ လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ အမြောက်တွေပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက် ပြင်းအားများတဲ့တုန်ခါမှုတွေကြောင့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံချို့မှာ ထိခိုက်အက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလိုမျိုး အမြောက်တွေနဲ့ လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့် မြောက်ဦးမြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်၊ အရှေ့တောင်ဘက်၊ အရှေ့မြောက်ဘက် အရပ်တွေမှာရှိနေတဲ့ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေဟာ အတွင်းကြေပြီး ထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ မြောက်ဦးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်သန်းကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီထိခိုက်သွားခဲ့တဲ့ အမွေအနှစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လုံခြုံရေးနဲ့ မိုင်းအန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်နေရတဲ့အတွက် သွားရောက်ပြီး စာရင်းကောက်ယူမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ အခက်အခဲတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ သူကဆိုပါတယ်။
မြောက်ဦးရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့် ယူနက်စကိုအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့အတွက် ပုဂံလို အလွယ်တကူနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခံရမလား။ ခက်ခဲမလားဆိုတာကို ပြောဖို့အတွက် အခဲအခက်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။
"ကျွန်မကတော့ သမိုင်းအထောက်အထားရှာဖွေရေး ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူထားတဲ့အတွက် ကျွန်မအနေနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ အထောက်အထားတွေကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းနဲ့ စစ်ပွဲရပ်တန့်ခြင်း၊ မရပ်တန့်ခြင်းက မပြောနိုင်တဲ့အတွက် စောင့်ကြည့်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် အဖွဲ့က ဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲ၊အစိုးရဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲဆိုတာ ကျွန်မအနေနဲ့ မပြောနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် သုံးသပ်ဖို့ခက်ပါတယ်။"လို့ဒေါ်ခင်သန်းကပြောပါတယ်။
ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်တာမျိုး မရှိဘဲနဲ့ သွေးခြည်ဥ အညိုအမဲစွဲတာတွေ ဖြစ်နေပြီလား။
ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်မိတာမျိုးတွေလည်း မရှိဘဲနဲ့ လက်တွေ ခြေထောက်တွေမှာ ခဏခဏ အညိုအမဲစွဲ သွေးခြည်ဥတာမျိုးတွေ ဖြစ်နေပြီလား။ ဒါကပြောရမယ်ဆို အစပိုင်းမှာပြဿနာမရှိပေမယ့် နောက်ပိုင်းကျရင် ဆိုးဝါးလာမယ့် အခြေအနေလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီတော့ ဒါတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာကို သိဖို့လိုလာတာပေါ့ ။
အကြောင်းအရင်းတွေကို အရင်မပြောခင် သွေးခြည်ဥတယ် အညိုအမဲစွဲတယ်ဆိုတာ ဘာလဲအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။
သွေးခြည်ဥတယ်ဆိုတာ အရေပြားအောက်မှာရှိတဲ့ သွေးကြောလေးတွေ ပေါက်ပြီး သွေးတွေထွက်လာကာ ညိုမဲတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုတ်ကျတာဖြစ်ဖြစ်၊ အထိုးခံရလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ လေးတဲ့အရာတစ်ခုခု အဖိခံရလို့ ဖြစ်ဖြစ် သွေးကြောလေးတွေပေါက်ပြီး အညိုအမဲ စွဲတတ်ပါတယ်။ အသေးအမွှား အညိုအမဲစွဲတာလောက်က ရက်ပိုင်းလောက်နဲ့ ပြန်ပျောက်တတ်ပေမယ့် ပြင်းထန်တဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် ရတဲ့ သွေးခြည်ဥတာမျိုးကတော့ လပိုင်းလောက် ပျောက်ဖို့ အချိန်ယူရတတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းတော့ ထိခိုက်မိရင်သွေးခြည်ဥတတ်ကြတာပဲလေ။ ပုံမှန် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ ။
သွေးခြည်ဥတာမျိုးတွေထဲကမှ ခုပြောမယ့် သွေးခြည်ဥတဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရင် ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
• ထိခိုက်မိတာတော့ နည်းနည်းလေး ဒါပေမယ့်သွေးခြည်ဥနေတာက အကြီးကြီးဖြစ်နေတာ
• အကြောင်းအရာတိတိပပ မရှိဘဲနဲ့ သွေးခြည်ဥရာတွေ အများကြီးပေါ်နေတာ
• သွေးခြည်တစ်ခါဥ ပြီးသွားရင် ပြန်ပျောက်အောင် လနဲ့ချီပြီးစောင့်ရတာ
• ထိခိုက်မိပြီး သွေးထွက်တာ ၁၀ မိနစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိ မတိတ်တာမျိုးတွေ ဖြစ်နေရင် ဒါပုံမှန် မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆိုလို့ရပါတယ်။
ဒါဆို ဒီလို ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက်ထားတာမျိုးတွေ မရှိဘဲနဲ့ သွေးခြည်ဥတာလွယ်လွယ်ဖြစ်နေရတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ နည်းနည်းပါးပါးထိခိုက်မိရုံလောက်နဲ့ သွေးခြည်ဥတာ မဖြစ်တတ်ကြဘူးလေ။
သွေးခြည်ဥလွယ်ခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ သွေးကြောလေးတွေက ပါးပါးလာပြီး အားနည်းလာတာကြောင့် နည်းနည်းလေး ထိခိုက်မိတာနဲ့ သွေးခြည်ဥတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အသက်ကြီးတော့ ပါးလာတဲ့ အရေပြားကြောင့်လည်း သွေးခြည်ဥတာတွေ ပိုပြီး ထင်းနေတတ်ပါတယ်။
• သွေးကျဲဆေး – သွေးကျဲဆေးဆိုတော့ ထုံးစံအတိုင်း သွေးခဲမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနေရတော့ ဒီဆေးတွေ စွဲသောက်ပါများလာရင် နောက်ပိုင်း နည်းနည်းလေးထိခိုက်မိတာနဲ့ သွေးထွက်လွယ်နေတတ်လို့ သွေးခြည်ဥတာမျိုးတွေ ခဏခဏ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးတွေကတော့ waffrin တို့ heparin ပေါ့။
• တစ်ချို့တိုင်းရင်းဆေးတွေဖြစ်တဲ့ ginkgo biloba၊ ဂျင်ဆင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ ဂျင်းတွေ အများကြီးပါတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးတွေကျတော့ သွေးကြောတွေကို အားနည်းစေပြီး သွေးယိုတဲ့ ပြဿနာကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
• စတီးရွိုက်တို့၊ စိတ်ကျရောဂါဆေးတို့ကလည်း သွေးကြောတွေကို တဖြည်းဖြည်း ပါးလာစေတာကြောင့် သွေးခြည်ဥတာ အလွယ်တကူ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်ဒီဆေးတွေသောက်ပြီး ကိုယ့်ဆီမှာ သွေးခြည်ဥတာ၊ ထိခိုက်မိပြီးရင် သွေးတော်တော်နဲ့ မတိတ်တာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင် ဆရာဝန်နဲ့ သေချာ ဆွေးနွေးပြီး ဆေးကနေရမယ့် အကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးကို ပြန်ချိန်ဆသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာမှာ သွေးထွက်ခဲ့ရင် သွေးတိတ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက် အသည်းကနေ သွေးတိတ်စေတဲ့ ပရိုတင်းလေးတွေထုတ်ပေးရပါတယ်။ ဒီတော့ သွေးတိတ်စေဖို့အတွက် အသည်းရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကလည်း အရေးကြီးသေးတာပေါ့။ ဒီတော့ အသည်းကိုပျက်စီးစေတဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ အရက် အလွန်အကျွံ သောက်တာ၊ အသည်းခြောက်တာနဲ့ အသည်းရောဂါဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေမှာ သွေးခြည်ဥတဲ့ပြဿနာတွေ အလွယ်တကူဖြစ်တတ်ပါတယ်။
မွေးရာပါ သွေးခဲခြင်းဆိုင်ရာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရောဂါ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Von Willebrand disease ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေမှာ သွေးတိတ်စေဖို့ တကယ်ကို အရေးကြီးတဲ့ Von Willebrand ပရိုတင်းလေးပါမလာတာ၊ နည်းနေတာကြောင့် သွေးခြည်ဥတဲ့ ပြဿနာ အလွယ်တကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ Von Willebrand ပြဿနာက မျိုးရိုးဗီဇပြဿနာဖြစ်တာကြောင့် အသက်ာကီးတဲ့သူတွေထက် မွေးကင်းစကလေးတွေနဲ့ ငယ်တဲ့ကလေးတွေမှာ ပိုအတွေ့များပါတယ်။
ဗီတာမင်တွေထဲမှာ သွေးနဲပက်သက်လို့ တာဝန် အရှိဆုံကတော့ ဗီတာမင် C ပါ။ ဗီတာမင် C ချို့တဲ့ရင် သွားဖုံးသွေးယိုတဲ့ ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကြားဖူးတယ်မလား။ နောက်သွေးထွက်တာ သွေးတိတ်တာနဲ့ ပက်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ ဗီတာမင် တစ်ခုကတော့ ဗီတာမင် K ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင် K ချို့တဲ့တဲ့သူတွေဟာ အခြားသူတွေထက်စာရင် သွေးတိတ်တာပိုကြာတတ်ပြီး သွေးခြည်ဥတာလည်း ပိုလွယ်တတ်ပါတယ်။
သွေးကြောရောင်တဲ့ပြဿနာရှိတဲ့သူတွေမှာ သွေးကြောတွေပုံမှန်မဟုတ်တာကြောင့် သွေးယိုတာတွေနဲ့ သွေးခြည်ဥတဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ အသက် ၅၀ နောက်ပိုင်း လူတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ပြင်နားတွေမှာ ခရမ်းရောင်ပြင်လိုက် အညိုအမဲစွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ထိခိုက်မိတာသေးသေးလေးတစ်ခုကနေ ဖြစ်တာဖြစ်ပြီး ပြန်ပျောက်ဖို့အချိန်ယူရတဲ့အပြင် အရွယ်အစားကလည်း ပုံမှန်ထက်ပိုကြီးနေတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာ နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချရမှာ ဖြစ်ပါတ်ယ။
သွေးနဲ့ပက်သက်တဲ့ ပြဿာနတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ သွေးကင်ဆာကို ချန်ခဲ့လို့ လုံးဝမရဘူးပေါ့။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီကင်ဆာ၊ သွေးကင်ဆာ စတဲ့သွေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကင်ဆာတွေ အားလုံးက သွေးခြည်ဥလွယ်တာ သွေးယိုတာစတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေမှာပါ။
• ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး သွေးခြည်ဥတာကြီးနေမယ်
• နည်းနည်းလေးထိခိုက်မိတာနဲ့ သွေးခြည်ဥတာတွေ ဖြစ်တော့တာပဲ
• သွေးခြည်ဥ အညိုမဲစွဲတာတွေအပြင် မျက်လုံးတွေ အသားတွေဝါလာတာ
• စွဲသောက်နေတဲ့ဆေးတွေကြောင့်လားဆိုပြီး သံသယရှိတဲ့အခါနဲ့
• သွေးခြည်ဥတဲ့နေရာက နာနေတတ်ပြီး ပြန်ပျောက်ဖို့ အချိန်တော်တော်ကြာ နေတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ဆရာဝန်ဆီ သွားပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။။
ရေးသားသူ -Dr. Thin Yadanar @ Frances
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ-Dr. Thurein Hlaing Win
“ယခုဆောင်းပါးကို Myanmar Digital News ၏ မိတ်ဘက်ဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် Hello ဆရာဝန် https://hellosayarwon.com/ မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်”
ကွီးကွီးမားမား ထိခိုကျတာမြိုး မရှိဘဲနဲ့ သှေးခွညျဥ အညိုအမဲစှဲတာတှေ ဖွဈနပွေီလား။ ။
ကွီးကွီးမားမား ထိခိုကျမိတာမြိုးတှလေညျး မရှိဘဲနဲ့ လကျတှေ ခွထေောကျတှမှော ခဏခဏ အညိုအမဲစှဲ သှေးခွညျဥတာမြိုးတှေ ဖွဈနပွေီလား။ ဒါကပွောရမယျဆို အစပိုငျးမှာပွဿနာမရှိပမေယျ့ နောကျပိုငျးကရြငျ ဆိုးဝါးလာမယျ့ အခွအေနလေို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဒီတော့ ဒါတှေ ဘာကွောငျ့ဖွဈရတာလဲဆိုတာကို သိဖို့လိုလာတာပေါ့ ။
အကွောငျးအရငျးတှကေို အရငျမပွောခငျ သှေးခွညျဥတယျ အညိုအမဲစှဲတယျဆိုတာ ဘာလဲအရငျပွောပွခငျြပါတယျ။
သှေးခွညျဥတယျဆိုတာ အရပွေားအောကျမှာရှိတဲ့ သှေးကွောလေးတှေ ပေါကျပွီး သှေးတှထှေကျလာကာ ညိုမဲတကျလာတာဖွဈပါတယျ။ ပွုတျကတြာဖွဈဖွဈ၊ အထိုးခံရလို့ဖွဈဖွဈ၊ လေးတဲ့အရာတဈခုခု အဖိခံရလို့ ဖွဈဖွဈ သှေးကွောလေးတှပေေါကျပွီး အညိုအမဲ စှဲတတျပါတယျ။ အသေးအမှား အညိုအမဲစှဲတာလောကျက ရကျပိုငျးလောကျနဲ့ ပွနျပြောကျတတျပမေယျ့ ပွငျးထနျတဲ့ ထိခိုကျဒဏျရာကွောငျ့ ရတဲ့ သှေးခွညျဥတာမြိုးကတော့ လပိုငျးလောကျ ပြောကျဖို့ အခြိနျယူရတတျပါတယျ။ လူတိုငျးတော့ ထိခိုကျမိရငျသှေးခွညျဥတတျကွတာပဲလေ။ ပုံမှနျ မဟုတျဘူးဆိုတာ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ။ ။
သှေးခွညျဥတာမြိုးတှထေဲကမှ ခုပွောမယျ့ သှေးခွညျဥတဲ့ပုံစံမြိုးတှတှေရေ့ငျ ပုံမှနျမဟုတျဘူးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
• ထိခိုကျမိတာတော့ နညျးနညျးလေး ဒါပမေယျ့သှေးခွညျဥနတောက အကွီးကွီးဖွဈနတော
• အကွောငျးအရာတိတိပပ မရှိဘဲနဲ့ သှေးခွညျဥရာတှေ အမြားကွီးပျေါနတော
• သှေးခွညျတဈခါဥ ပွီးသှားရငျ ပွနျပြောကျအောငျ လနဲ့ခြီပွီးစောငျ့ရတာ
• ထိခိုကျမိပွီး သှေးထှကျတာ ၁၀ မိနဈကြျောကွာတဲ့အထိ မတိတျတာမြိုးတှေ ဖွဈနရေငျ ဒါပုံမှနျ မဟုတျဘူးလို့ ယူဆိုလို့ရပါတယျ။
ဒါဆို ဒီလို ကွီးကွီးမားမား ထိခိုကျထားတာမြိုးတှေ မရှိဘဲနဲ့ သှေးခွညျဥတာလှယျလှယျဖွဈနရေတာ ဘာ့ကွောငျ့လဲ။ နညျးနညျးပါးပါးထိခိုကျမိရုံလောကျနဲ့ သှေးခွညျဥတာ မဖွဈတတျကွဘူးလေ။
သှေးခွညျဥလှယျခွငျးကို ဖွဈစသေညျ့ အကွောငျးအရငျးမြား။
အသကျကွီးလာတဲ့အခါ သှေးကွောလေးတှကေ ပါးပါးလာပွီး အားနညျးလာတာကွောငျ့ နညျးနညျးလေး ထိခိုကျမိတာနဲ့ သှေးခွညျဥတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။ နောကျပွီး အသကျကွီးတော့ ပါးလာတဲ့ အရပွေားကွောငျ့လညျး သှေးခွညျဥတာတှေ ပိုပွီး ထငျးနတေတျပါတယျ။
• သှေးကြဲဆေး – သှေးကြဲဆေးဆိုတော့ ထုံးစံအတိုငျး သှေးခဲမဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးနရေတော့ ဒီဆေးတှေ စှဲသောကျပါမြားလာရငျ နောကျပိုငျး နညျးနညျးလေးထိခိုကျမိတာနဲ့ သှေးထှကျလှယျနတေတျလို့ သှေးခွညျဥတာမြိုးတှေ ခဏခဏ ဖွဈနတေတျပါတယျ။ နာမညျကွီးတှကေတော့ waffrin တို့ heparin ပေါ့။
• တဈခြို့တိုငျးရငျးဆေးတှဖွေဈတဲ့ ginkgo biloba၊ ဂငျြဆငျးနဲ့ ကွကျသှနျဖွူ ဂငျြးတှေ အမြားကွီးပါတဲ့ တိုငျးရငျးဆေးတှကေတြော့ သှေးကွောတှကေို အားနညျးစပွေီး သှေးယိုတဲ့ ပွဿနာကိုဖွဈစတေတျပါတယျ။
• စတီးရှိုကျတို့၊ စိတျကရြောဂါဆေးတို့ကလညျး သှေးကွောတှကေို တဖွညျးဖွညျး ပါးလာစတောကွောငျ့ သှေးခွညျဥတာ အလှယျတကူ ဖွဈစတေတျပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ဒီဆေးတှသေောကျပွီး ကိုယျ့ဆီမှာ သှေးခွညျဥတာ၊ ထိခိုကျမိပွီးရငျ သှေးတျောတျောနဲ့ မတိတျတာမြိုး ဖွဈခဲ့ရငျ ဆရာဝနျနဲ့ သခြော ဆှေးနှေးပွီး ဆေးကနရေမယျ့ အကြိုးနဲ့ ဆိုးကြိုးကို ပွနျခြိနျဆသငျ့ပါတယျ။
ကိုယျခန်ဓာမှာ သှေးထှကျခဲ့ရငျ သှေးတိတျအောငျလုပျဖို့အတှကျ အသညျးကနေ သှေးတိတျစတေဲ့ ပရိုတငျးလေးတှထေုတျပေးရပါတယျ။ ဒီတော့ သှေးတိတျစဖေို့အတှကျ အသညျးရဲ့လုပျဆောငျမှုကလညျး အရေးကွီးသေးတာပေါ့။ ဒီတော့ အသညျးကိုပကျြစီးစတေဲ့ ပွဿနာတှဖွေဈတဲ့ အရကျ အလှနျအကြှံ သောကျတာ၊ အသညျးခွောကျတာနဲ့ အသညျးရောဂါဖွဈနတေဲ့ ပွဿနာမြိုးတှမှော သှေးခွညျဥတဲ့ပွဿနာတှေ အလှယျတကူဖွဈတတျပါတယျ။
မှေးရာပါ သှေးခဲခွငျးဆိုငျရာ ပုံမှနျမဟုတျတဲ့ရောဂါ တဈခုဖွဈတဲ့ Von Willebrand disease ဝဒေနာခံစားနရေတဲ့သူတှမှော သှေးတိတျစဖေို့ တကယျကို အရေးကွီးတဲ့ Von Willebrand ပရိုတငျးလေးပါမလာတာ၊ နညျးနတောကွောငျ့ သှေးခွညျဥတဲ့ ပွဿနာ အလှယျတကူဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီ Von Willebrand ပွဿနာက မြိုးရိုးဗီဇပွဿနာဖွဈတာကွောငျ့ အသကျာကီးတဲ့သူတှထေကျ မှေးကငျးစကလေးတှနေဲ့ ငယျတဲ့ကလေးတှမှော ပိုအတှမြေ့ားပါတယျ။
ဗီတာမငျတှထေဲမှာ သှေးနဲပကျသကျလို့ တာဝနျ အရှိဆုံကတော့ ဗီတာမငျ C ပါ။ ဗီတာမငျ C ခြို့တဲ့ရငျ သှားဖုံးသှေးယိုတဲ့ ပွဿနာဖွဈတယျဆိုတာ ကွားဖူးတယျမလား။ နောကျသှေးထှကျတာ သှေးတိတျတာနဲ့ ပကျသကျလို့တာဝနျရှိတဲ့ ဗီတာမငျ တဈခုကတော့ ဗီတာမငျ K ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဗီတာမငျ K ခြို့တဲ့တဲ့သူတှဟော အခွားသူတှထေကျစာရငျ သှေးတိတျတာပိုကွာတတျပွီး သှေးခွညျဥတာလညျး ပိုလှယျတတျပါတယျ။
သှေးကွောရောငျတဲ့ပွဿနာရှိတဲ့သူတှမှော သှေးကွောတှပေုံမှနျမဟုတျတာကွောငျ့ သှေးယိုတာတှနေဲ့ သှေးခွညျဥတဲ့ ပွဿနာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒါကတော့ အသကျ ၅၀ နောကျပိုငျး လူတှမှော အဖွဈမြားတဲ့ ပွဿနာတဈခုဖွဈပွီး လကျပွငျနားတှမှော ခရမျးရောငျပွငျလိုကျ အညိုအမဲစှဲတာမြိုးတှဖွေဈတတျပါတယျ။ ထိခိုကျမိတာသေးသေးလေးတဈခုကနေ ဖွဈတာဖွဈပွီး ပွနျပြောကျဖို့အခြိနျယူရတဲ့အပွငျ အရှယျအစားကလညျး ပုံမှနျထကျပိုကွီးနတေတျပါတယျ။ ဒီလို ပွဿနာဖွဈနတေဲ့သူတှဟော နရေောငျခွညျနဲ့ထိတှမှေု့ကို အတတျနိုငျဆုံး လြှော့ခရြမှာ ဖွဈပါတျယ။
သှေးနဲ့ပကျသကျတဲ့ ပွဿာနတှေ ဖွဈတယျဆိုတော့ သှေးကငျဆာကို ခနျြခဲ့လို့ လုံးဝမရဘူးပေါ့။ ရိုးတှငျးခွငျဆီကငျဆာ၊ သှေးကငျဆာ စတဲ့သှေးနဲ့ဆိုငျတဲ့ ကငျဆာတှေ အားလုံးက သှေးခွညျဥလှယျတာ သှေးယိုတာစတဲ့ ပွဿနာတှကေို ဖွဈစမှောပါ။
• ပုံမှနျထကျပိုပွီး သှေးခွညျဥတာကွီးနမေယျ
• နညျးနညျးလေးထိခိုကျမိတာနဲ့ သှေးခွညျဥတာတှေ ဖွဈတော့တာပဲ
• သှေးခွညျဥ အညိုမဲစှဲတာတှအေပွငျ မကျြလုံးတှေ အသားတှဝေါလာတာ
• စှဲသောကျနတေဲ့ဆေးတှကွေောငျ့လားဆိုပွီး သံသယရှိတဲ့အခါနဲ့
• သှေးခွညျဥတဲ့နရောက နာနတေတျပွီး ပွနျပြောကျဖို့ အခြိနျတျောတျောကွာ နတေဲ့ အခါမြိုးတှမှော ဆရာဝနျဆီ သှားပွဖို့ လိုအပျပါတယျ ။။
ရေးသားသူ -Dr. Thin Yadanar @ Frances
ဆေးပညာပိုငျးဆိုငျရာတညျးဖွတျသူ-Dr. Thurein Hlaing Win
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ကုသမှု တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Stent (စတန့်) ထည့်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တုန်းက စားချင်တာတွေ မဆင်မခြင် စားခဲ့ကြတာကတစ်ကြောင်း လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ခဲ့တာကြတစ်ကြောင်း နှလုံးကျန်းမာအောင် မထိန်းခဲ့မိတာကတစ်ကြောင်း အသက်ကြီးလာတော့ ဝလာတာက တစ်ကြောင်းနဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတဲ့ပြဿနာတွေ အဖြစ်များလာတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ နှလုံးသွေးကြောဆိုတာကလည်း အရေးကြီးတယ်မလား။ ကျဉ်းရာကနေ နောက်ပိုင်း နှလုံးသွေးကြော ပိတ်သွားတာမျိုးကနေ အသက်ဆုံးတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတတ်တယ်လေ။
ကျဉ်းနေတဲ့နှလုံးသွေးကြောကြောင့် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်လိုက်တိုင်း မောလို့ ဆေးခန်းသွားပြတဲ့အခါ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနေပြီလို့ အဖြေထွက်တာနဲ့ ဆရာဝန်က Stent ထည့်ပြီး နှလုံးသွေးကြောပြန်ချဲ့ဖို့လိုကြောင်း ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Stent ဆိုတာဘာလဲ၊ သူက ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ရှိလို့လဲဆိုတဲ့အကြောင်း ဒီဆောင်းပါးထဲမှာ ပြောပြပေးမှာပါ။
Stent ဆိုတာ ဘာလဲ။
Stent ဆိုတာ သတ္တု(ဒါမှမဟုတ်) ပလတ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ သေးငယ်တဲ့ ပိုက်လေးတစ်ချောင်းပါ။ ပိတ်နေတဲ့ သွေးကြောတွေ ပြန်ပွင့်ဖို့၊ ကျဉ်းနေတဲ့ သွေးကြောတွေ ပြန်ကျယ်စေဖို့ ဒီ Stent လေးထည့်ပြီး ပုံမှန်သွေးလည်ပတ်မှု ရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ သွေးကြောကြီးတွေအတွက်တော့ specialized fabric နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ Stent-grafts တွေ ထည့်ရပါတယ်။
ဘယ်လိုလူတွေက stent ထည့်ဖို့ လိုအပ်သလဲ။
• သွေးတွင်းအဆီဓာတ်များပြီး ပုံလာတဲ့ အဆီပြင်တွေကြောင့် သွေးကြောကျဉ်းသွားတဲ့လူတွေ
• အရေးပေါ် အခြေအနေဖြစ်တဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်သွားတဲ့ လူနာတွေဆို ချက်ချင်းအရေးပေါ် stent ထည့်ရတတ်ပါတယ်။
Stent ထည့်တာက နှလုံးသွေးကြောမပိတ်အောင် တစ်ခုတည်းအတွက် သုံးလို့ရတာလား။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတာ ပိတ်တာအတွက် stent ထည့်ပြီးကုသတာအပြင် stent က
• Aortic Aneurysm (နှလုံးပင်မသွေးကြောဖောင်းခြင်း) brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း) စတဲ့ သွေးကြောဖောင်းတွေ မပေါက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
• သည်းခြေလမ်းကြောင်းပိတ်သွားတာ၊ လေပြွန်ကျဉ်းနေတာနဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်သွားတာ စတဲ့ ပြဿနာတွေမှာလည်း stent ထည့်ပြီး ပုံမှန်လမ်းကြောင်းပြန်ရအောင် လုပ်လို့ရပါသေးတယ်။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနေလို့ Stent ထည့်ကုသမှု ခံယူတော့မယ်ဆိုရင် လူနာတွေဘက်က ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်လဲ။
ဒီလို ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာ stent ထည့်မှာလဲ ဘယ်သွေးကြောအတွက် ဘယ်လမ်းကြော်ငးအတ်ွက ထည့်မှာလဲဆိုတာပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ Stent ကို များသောအားဖြင့် သွေးကြောတွေ အတွက်ပဲ သုံးကြတာဆိုတော့ သွေးကြောတွေထဲ stent မထည့်ခင် လူနာဘက်က ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတဲ့အချက်လေးတွေ အကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
• စွဲသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ အကြောင်း ဆရာဝန်ကို သေချာပြောပြပါ။
• သွေးကျဲစေတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ aspirin, clopidogrel, ibuprofen, နဲ့ naproxen တို့ကို လုံးဝမသောက်ပါနဲ့။ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ပါ။
• ဆေးလိပ်သောက်နေတဲ့သူဆို ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
Stent တစ်ခုကို ဘယ်လိုထည့်လဲ။
နှလုံးသွေးကြောထဲ ပိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ ခွဲစိတ်မှု အကြီကြီးလုပ်ရမှာပဲလို့ ထင်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Stent ထည့်ပြီး နှလုံးသွေးကြောချဲ့တဲ့ ခွဲစိတ်မှုဟာ ခွဲစိတ်ရာ အကြီးကြီးမလိုဘဲ သေးသေးလေးနဲ့တင်ပြီးသွားတဲ့ ခွဲစိတ်မှု တစ်ခုပါ။
ပေါင်ကြား(ဒါမှမဟုတ်) လက်မောင်းအတွင်း တစ်နေရာမှာ ခွဲစိတ်ရာသေးသေးလေးပေးပြီး ကင်မရာတပ်ဆင်ထားတဲ့ catheter ကနေတစ်ဆင့် လိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင် Stent ကို ထည့်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုထည့်နေချိန် သွေးကြောတွေကို ပိုပြီးမြင်သာစေဖို့အတွက် ဆရာဝန်ကနေ angiogram လို့ခေါ်တဲ့ သွေးကြောတွင်းဆေးရည်ထိုးသွင်းပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနည်းပညာကို သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို နည်းပညာတွေကိုသုံးပြီး ပျက်စီးနေတဲ့သွေးကြောနေရာကို သိမယ်၊ အဲဒီနေရာရောက်အောင် stent ထည့်ပြီး ပြုပြင်ပေးမယ်၊ ပြီးရင် stent ကလွဲပြီး ကျန်တာတွေအားလုံးကို ပြန်ထုတ်၊ ခွဲစိတ်ရာကို ပြန်ချုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Stent ထည့်တဲ့ ကိစ္စမှာရော နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ ရှိသေးလား။
သူကလည်းခွဲစိတ်မှု တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေကတော့
• သွေးကြောတွေကို ပုံရိပ်ဖော်တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ ဆေးရည်တွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်တာ
• မေ့ဆေးပေးခွဲစိတ်ရတာဖြစ်တာကြောင့် မေ့ဆေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ
• သွေးကြောကို ခွဲစိတ်ရာမှာဖြစ်တာကြောင့် သွေးထွက်လွန်တဲ့ပြဿနာတွေ
• သွေးထွက်ရာကနေ သွေးခဲလေးတွေဖြစ်သွားနိုင်တာတွေ
• Stent က အခြားသွေးကြောတစ်ခုအပေါ် သွားပိမိပြီး သွေးကြောပိတ်သွားနိုင်တာတွေ
• အသစ်ဝင်လာတဲ့ stent ကို ခုခံအားက ပြန်တိုက်လို့ သွေးကြောတွေ ရောင်ပြီး ကျဉ်းလာတာမျိုးတွေ
• လေပြွန်ထဲ stent ထည့်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာဆို အသက်ရှူရခက်တာတွေ
• ကျောက်ကပ်ထဲ stent ထည့်တဲ့ပြဿနာတွေမှာဆို ကျောက်တည်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Stent ထည့်ပြီးနောက်ပိုင်း ဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်သေးလဲ။
• ခွဲထားတဲ့ အရာလေးကနေ နာကျင်မှု အနည်းငယ်ခံစားရမယ်။ အဲဒီအတွက် ဆရာဝန်တွေက ဆေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
• သွေးခဲတာမျိုးတွေ မဖြစ်အောင်လို့ သွေးကျဲဆေးတွေလည်း သောက်ရပါလိမ့်မယ်။
• နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာ လေဖြတ်တာမျိုးတွေ ကြောင့် stent ထည့်ရရင်တော့ စိတ်ချရအောင် ဆေးရုံမှာ ရက်အနည်းငယ်နေဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
• နောက်ပြီး သွေးကြောကျဉ်းတာ သွေးတွင်းအဆီများတာမျိုးတွေ ထပ်မဖြစ်အောင်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံတွေကို ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ။ ။
ရေးသားသူ-Dr. Thin Yadanar @ Frances
နှလုံးသှေးကွောကဉျြး ကုသမှု တဈခုဖွဈတဲ့ Stent (စတနျ့) ထညျ့တယျဆိုတာ ဘာလဲ။
ငယျငယျရှယျရှယျတုနျးက စားခငျြတာတှေ မဆငျမခွငျ စားခဲ့ကွတာကတဈကွောငျး လကေ့ငျြ့ခနျး မလုပျခဲ့တာကွတဈကွောငျး နှလုံးကနျြးမာအောငျ မထိနျးခဲ့မိတာကတဈကွောငျး အသကျကွီးလာတော့ ဝလာတာက တဈကွောငျးနဲ့ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးတဲ့ပွဿနာတှေ အဖွဈမြားလာတာ အားလုံးသိကွမှာပါ။ နှလုံးသှေးကွောဆိုတာကလညျး အရေးကွီးတယျမလား။ ကဉျြးရာကနေ နောကျပိုငျး နှလုံးသှေးကွော ပိတျသှားတာမြိုးကနေ အသကျဆုံးတဲ့အထိ ဖွဈသှားတတျတယျလေ။
ကဉျြးနတေဲ့နှလုံးသှေးကွောကွောငျ့ လှုပျလှုပျရှားရှား လုပျလိုကျတိုငျး မောလို့ ဆေးခနျးသှားပွတဲ့အခါ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးနပွေီလို့ အဖွထှေကျတာနဲ့ ဆရာဝနျက Stent ထညျ့ပွီး နှလုံးသှေးကွောပွနျခြဲ့ဖို့လိုကွောငျး ပွောပါလိမျ့မယျ။ ဒီတော့ Stent ဆိုတာဘာလဲ၊ သူက ဘယျလိုကောငျးကြိုးတှေ ရှိလို့လဲဆိုတဲ့အကွောငျး ဒီဆောငျးပါးထဲမှာ ပွောပွပေးမှာပါ။
Stent ဆိုတာ သတ်တု(ဒါမှမဟုတျ) ပလတျစတဈနဲ့လုပျထားတဲ့ သေးငယျတဲ့ ပိုကျလေးတဈခြောငျးပါ။ ပိတျနတေဲ့ သှေးကွောတှေ ပွနျပှငျ့ဖို့၊ ကဉျြးနတေဲ့ သှေးကွောတှေ ပွနျကယျြစဖေို့ ဒီ Stent လေးထညျ့ပွီး ပုံမှနျသှေးလညျပတျမှု ရအောငျလုပျလို့ရပါတယျ။ သှေးကွောကွီးတှအေတှကျတော့ specialized fabric နဲ့ပွုလုပျထားတဲ့ Stent-grafts တှေ ထညျ့ရပါတယျ။
ဘယျလိုလူတှကေ stent ထညျ့ဖို့ လိုအပျသလဲ။
• သှေးတှငျးအဆီဓာတျမြားပွီး ပုံလာတဲ့ အဆီပွငျတှကွေောငျ့ သှေးကွောကဉျြးသှားတဲ့လူတှေ
• အရေးပျေါ အခွအေနဖွေဈတဲ့နှလုံးသှေးကွောပိတျသှားတဲ့ လူနာတှဆေို ခကျြခငျြးအရေးပျေါ stent ထညျ့ရတတျပါတယျ။
Stent ထညျ့တာက နှလုံးသှေးကွောမပိတျအောငျ တဈခုတညျးအတှကျ သုံးလို့ရတာလား။
နှလုံးသှေးကွောကဉျြးတာ ပိတျတာအတှကျ stent ထညျ့ပွီးကုသတာအပွငျ stent က
• Aortic Aneurysm (နှလုံးပငျမသှေးကွောဖောငျးခွငျး) brain Aneurysm (ဦးနှောကျသှေးကွောဖောငျးခွငျး) စတဲ့ သှေးကွောဖောငျးတှေ မပေါကျအောငျ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
• သညျးခွလေမျးကွောငျးပိတျသှားတာ၊ လပွှေနျကဉျြးနတောနဲ့ ဆီးလမျးကွောငျးပိတျသှားတာ စတဲ့ ပွဿနာတှမှောလညျး stent ထညျ့ပွီး ပုံမှနျလမျးကွောငျးပွနျရအောငျ လုပျလို့ရပါသေးတယျ။
နှလုံးသှေးကွောကဉျြးနလေို့ Stent ထညျ့ကုသမှု ခံယူတော့မယျဆိုရငျ လူနာတှဘေကျက ဘာတှေ ပွငျဆငျထားဖို့လိုအပျလဲ။
ဒီလို ပွငျဆငျတဲ့နရောမှာ ကိုယျဘယျနရောမှာ stent ထညျ့မှာလဲ ဘယျသှေးကွောအတှကျ ဘယျလမျးကွျောငးအတျှက ထညျ့မှာလဲဆိုတာပျေါ မူတညျပွီး ကှဲပွားမှုတှေ ရှိပါတယျ။ Stent ကို မြားသောအားဖွငျ့ သှေးကွောတှေ အတှကျပဲ သုံးကွတာဆိုတော့ သှေးကွောတှထေဲ stent မထညျ့ခငျ လူနာဘကျက ပွငျဆငျထားဖို့လိုတဲ့အခကျြလေးတှေ အကွောငျးပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
• စှဲသောကျနတေဲ့ ဆေးတှေ အကွောငျး ဆရာဝနျကို သခြောပွောပွပါ။
• သှေးကြဲစတေဲ့ ဆေးတှဖွေဈတဲ့ aspirin, clopidogrel, ibuprofen, နဲ့ naproxen တို့ကို လုံးဝမသောကျပါနဲ့။ ဆရာဝနျနဲ့ သခြောတိုငျပငျပါ။
• ဆေးလိပျသောကျနတေဲ့သူဆို ဆေးလိပျဖွတျပါ။
Stent တဈခုကို ဘယျလိုထညျ့လဲ။
နှလုံးသှေးကွောထဲ ပိုကျထညျ့ရမယျဆိုတော့ ခှဲစိတျမှု အကွီကွီးလုပျရမှာပဲလို့ ထငျနကွေတဲ့သူတှေ ရှိမယျထငျပါတယျ။ တကယျတော့ Stent ထညျ့ပွီး နှလုံးသှေးကွောခြဲ့တဲ့ ခှဲစိတျမှုဟာ ခှဲစိတျရာ အကွီးကွီးမလိုဘဲ သေးသေးလေးနဲ့တငျပွီးသှားတဲ့ ခှဲစိတျမှု တဈခုပါ။
ပေါငျကွား(ဒါမှမဟုတျ) လကျမောငျးအတှငျး တဈနရောမှာ ခှဲစိတျရာသေးသေးလေးပေးပွီး ကငျမရာတပျဆငျထားတဲ့ catheter ကနတေဈဆငျ့ လိုခငျြတဲ့နရောရောကျအောငျ Stent ကို ထညျ့လရှေိ့ပါတယျ။ ဒီလိုထညျ့နခြေိနျ သှေးကွောတှကေို ပိုပွီးမွငျသာစဖေို့အတှကျ ဆရာဝနျကနေ angiogram လို့ချေါတဲ့ သှေးကွောတှငျးဆေးရညျထိုးသှငျးပုံရိပျဖျောခွငျးနညျးပညာကို သုံးမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလို နညျးပညာတှကေိုသုံးပွီး ပကျြစီးနတေဲ့သှေးကွောနရောကို သိမယျ၊ အဲဒီနရောရောကျအောငျ stent ထညျ့ပွီး ပွုပွငျပေးမယျ၊ ပွီးရငျ stent ကလှဲပွီး ကနျြတာတှအေားလုံးကို ပွနျထုတျ၊ ခှဲစိတျရာကို ပွနျခြုပျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Stent ထညျ့တဲ့ ကိစ်စမှာရော နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာတှေ ရှိသေးလား။
သူကလညျးခှဲစိတျမှု တဈခုဖွဈတာကွောငျ့ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာလေးတှေ ရှိပါတယျ။ ဖွဈနိုငျတဲ့ နောကျဆကျတှဲ ပွဿနာတှကေတော့
• သှေးကွောတှကေို ပုံရိပျဖျောတဲ့နရောမှာသုံးတဲ့ ဆေးရညျတှနေဲ့ ဓာတျမတညျ့တာ
• မဆေ့ေးပေးခှဲစိတျရတာဖွဈတာကွောငျ့ မဆေ့ေးရဲ့ နောကျဆကျတှဲ ဆိုးကြိုးတှေ
• သှေးကွောကို ခှဲစိတျရာမှာဖွဈတာကွောငျ့ သှေးထှကျလှနျတဲ့ပွဿနာတှေ
• သှေးထှကျရာကနေ သှေးခဲလေးတှဖွေဈသှားနိုငျတာတှေ
• Stent က အခွားသှေးကွောတဈခုအပျေါ သှားပိမိပွီး သှေးကွောပိတျသှားနိုငျတာတှေ
• အသဈဝငျလာတဲ့ stent ကို ခုခံအားက ပွနျတိုကျလို့ သှေးကွောတှေ ရောငျပွီး ကဉျြးလာတာမြိုးတှေ
• လပွှေနျထဲ stent ထညျ့တဲ့ ကိစ်စတှမှောဆို အသကျရှူရခကျတာတှေ
• ကြောကျကပျထဲ stent ထညျ့တဲ့ပွဿနာတှမှောဆို ကြောကျတညျတာမြိုးတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။
Stent ထညျ့ပွီးနောကျပိုငျး ဘာတှဆေကျဖွဈနိုငျသေးလဲ။
• ခှဲထားတဲ့ အရာလေးကနေ နာကငျြမှု အနညျးငယျခံစားရမယျ။ အဲဒီအတှကျ ဆရာဝနျတှကေ ဆေးပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
• သှေးခဲတာမြိုးတှေ မဖွဈအောငျလို့ သှေးကြဲဆေးတှလေညျး သောကျရပါလိမျ့မယျ။
• နှလုံးသှေးကွောပိတျတာ လဖွေတျတာမြိုးတှေ ကွောငျ့ stent ထညျ့ရရငျတော့ စိတျခရြအောငျ ဆေးရုံမှာ ရကျအနညျးငယျနဖေို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
• နောကျပွီး သှေးကွောကဉျြးတာ သှေးတှငျးအဆီမြားတာမြိုးတှေ ထပျမဖွဈအောငျလို့ ကိုယျ့ရဲ့ နထေိုငျစားသောကျမှု ပုံစံတှကေို ပွောငျးလဲဖို့လိုအပျပါလိမျ့မယျ ။ ။
ရေးသားသူ-Dr. Thin Yadanar @ Frances
လက်ပံတောင်း အနောက်က တရုတ်ကြေးနီစီမံကိန်းသစ် ခြေလှမ်း
ဓါတ်သတ္ထုစမ်းသပ်ရှာဖွေတိုင်းတာဖို့ ယန်စီကုမ္ပဏီ တင်ထားတဲ့ ဝါးစိမ်းတောင်ဒေသ
မုံရွာတစ်ဘက်ကမ်း က ဒေသခံတွေ အသက်နဲ့ လဲပြီး ကာကွယ်ခဲ့ကြတဲ့ လက်ပံတောင်းစီမံကိန်းအကြောင်းကို လူအတော်များများ ကြားဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
အခုစက်တင်ဘာလအတွင်းကပဲ လက်ပံတောင်းစီမံကိန်းနဲ့ မိုင်၂၀ လောက် အကွာမှာ မြန်မာယန်စီ တရုတ်ကုမ္ပဏီက နောက်ထပ်သတ္တုစီမံကိန်းသစ်တစ်ခုစမ်းသပ်ရှာဖွေမှာကို ကန့်ကွက်ဖို့မရှိဘူးဆိုပြီး တိုင်းအစိုးရ ကပြည်ထောင်စု အစိုးရ ကကို သဘောထားပေးပို့လိုက်ပါတယ်။
ဒါဟာ လက်ပံတောင်း အပြင်နောက်ထပ်စီမံကိန်း ရှာဖွေရေးကို တိုင်းအစိုးရ က ထောက်ခံပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ တိုင်းအစိုးရ ကကန့်ကွက်ရန်မရှိဘူးဆိုတာကြောင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ က ကခွင့်ပြဖို့ကသေချာသလောက်ရှိတယ်လို့ လည်း ယင်းမာပင်မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်မေရီက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မုံရွာတစ်ဘက်ကမ်း ကြေးနီသတ္ထုတူးဖော်ထုတ်လုပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေကို လက်ပံတောင်းဒေသနဲ့ စံပယ်ကြေးစင်ဒေသမှာ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးတော့ ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီနဲ့ ယန်စီကုမ္ပဏီစတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။
လမ်းမြေ ဆည်မြောင်းမြေ မြို့မြေ ရွာမြေ သာသနာမြေချန်ပြီး ဧက ၂၈၁၃၆ ဧက ကို ခွင့်ပြုပေး
အခုအဲဒီလုပ်ကွက်တွေရဲ့ အနီးနားက ယင်းမာပင် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲက ဝါးစိမ်းတောင်ဒေသမှာ ဧကတစ်သိန်းကျော်ကို ဓါတ်သတ္ထုစမ်းသပ်ရှာဖွေတိုင်းတာဖို့ ယန်စီကုမ္ပဏီမှ အစိုးရထံ မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
အဲဒီလျှောက်ထားမှုအပေါ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရက တိုင်းအစိုးရကို သဘောထားတောင်းခဲ့ပြီးတော့ တိုင်းအစိုးရက စီမံကိန်းအတွက် ဧက နှစ်သောင်းကျော်ကို ကန့်ကွက်ရန်မရှိဆိုပီးစီစစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က သဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
"ကျွန်မတို့ ဒေသကို စီမံကိန်းအတွက် သဘောထားလာကောက်တုန်း ဒေသခံတွေ သဘောမတူဘူးလို့ အားလုံး ကပြောထားပါတယ်။ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတဲ့ အခါ အစီစဉ်မရှိဘူးလို့ အစိုးရဘက်က ပြောထားပါတယ် ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အခုလိုစမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တာလဲ ဆိုတာ ကတော့ နားမလည်အောင်ဖြစ်နေပါတယ် " လို့ ဒေါ်အောင်မေရီက ပြောပါတယ်။
စစ်ကိုင်တိုင်းအတွင်းမှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်က နောက်ထပ်သတ္တုစီမံကိန်းသစ်တစ်ခု အစပျိုးလာတာ ကို ဒေသခံတွေက လုံးဝသဘောမတူတာကြောင့် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ဆန္ဒပြဖို့လည်းရှိနေတယ် လို့လည်း သူကဘီဘီစီကိုပြောပါတယ် ။
မြန်မာယန်စီကုမ္မဏီကတော တိုးချဲ့စီမံကိန်းအတွက် စမ်းသပ်တိုင်းတာဖြစ်မြောက်ရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီး တော့ လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်
သယံဇာတနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ကို မြန်မာယန်စီ ကုမ္မဏီကတော တိုးချဲ့စီမံကိန်းအတွက် စမ်းသပ်တိုင်းတာဖြစ်မြောက်ရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီး တော့ လျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရ အဖွဲ့ အစည်းအဝေး က စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ အစည်းဝေးအပြီးမှာ ကုမ္မဏီ အဆိုပြုတဲ့ ဧက တစ်သိန်းကျော်ထဲက စိုက်ပျိုးမြေ လမ်းမြေ ဆည်မြောင်းမြို့မြေ ရွာမြေ သာသနာမြေချန်ပြီး ဧက ၂၈၁၃၆ ဧက ကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီကြေးနီစီမံကိန်းဟာ စလာမယ် ဆိုရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြသနာ၊အလုပ်သမားပြသနာနဲ့လူမှုရေးပွတ်တိုက်မှုပြသနာများတွေ အများကြီး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
"လက်ပန်းတောင်းနဲ့ မိုင်၂၀လောက် ဝေးတာကို တိုးချဲ့စီမံကိန်းလို့ပြောတာ သဘောမတူပါဘူး၊ ကျွန်မက အခု သူတို့ မျက်စိ ကျနေတဲ့ ဝါးစီမ်းတောင် ရွာသူ ပါ၊ ကွှန်မတို့ဒေသမှာ အဲဒီစီမံကိန်း ဝင်လုပ်လို့ရအောင် ပညာတတ်နဲ့လူတွေ မရှိတော့ အလုပ်အကိုင်တွေရမယိဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဖူး နောက်တစ်ခု က သူတို့စမ်းသပ်တယ်ဆိုတာတူးချင်လို့စမ်းသပ်တာလေ မတူးချင်ရင်စမ်းသပ်မှာမဟုတ်ဖူး "လို့ လည်း ဒေါ်အောင်မေရီကပြောပါတယ် ။
စံပယ်တောင်ကြေးနီစီမံကိန်း ကြေးပြားထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းခွင်
မြန်မာယန်စီရဲ့ ကြေးနီစီမံကိန်းတိုးချဲ့စီမံကိန်းသစ်စမ်းသပ်ခြင်းအပေါ်မှာ ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေ့ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
"ရှာဖွေတဲ့ သူတွေက ကျွန်မတို့ရဲ့ သယံဇာတတွေကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိသွားပြီဆိုရင် သူတို့က နောက်မဆုတ်ဘဲ ရှေ့ကို မရ ရတဲ့နည်းနဲ့ လုပ်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မသဘောထား အရတော့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အရ လွှတ်တော်ထဲကနေ တရားဝင် ကန့်ကွက်မယ်လို့ "လည်း ဒေါ်အောင်မေရီကပြောပါတယ် ။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်းဟာ ယခု အချိန်ထိ ဒေသခံတွေနဲ့ ပြဿနာ ရှိနေချိန်မှာ အခုလို နောက်ထပ်စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး လုပ်လာတာကိုလည်း ဝေဖန်နေကြပါတယ်။
"ဒေသခံတွေက ကတောတောင်တွေ မှီခိုပြီးလုပ်ကိုင်စားနေရတာ သူတို့ ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်မှာစိုးရိမ်တယ်။ စီမံကိန်းကြောင့်အလုပ်ရမယ်ဆိုတာကလည်းလက်ပံတောင်းတို့ စံပယ်တောင်တို့ကို ကြည့်လေ အားလုံးကို အလုပ်မပေးနိုင် ဘူး နောက်မျိုးဆက်အတွက်လည်း ဒေသမှာ ဘာမှ မရှိတော့မှာ စိတ်ပူကြတာပေါ့ "လို့လည်းဒေါ်အောင်မေရီကပြောပါတယ်။
လက်ပံတောင်းစီမံကိန်းမှာ ဒေသခံတွေပညာအရည်ချင်းကြောင့် အလုပ်သတ်မှတ်တဲ့ ပမာဏ မရခဲ့ပါဘူးလို့တိုင်း လွှတ်တော်မှာပြော
သယံဇာတနဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ကို တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တော့ တူးဖော်ထုတ်လုပ်ရန်သဘောတူကြောင်း သဘောထားမှတ်ချက်ပေးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။
စမ်းသပ်ရှာဖွေတိုင်းတာမယ့်အပေါ် ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း စိစစ် သဘောထားပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စမ်းသပ်ပြီးမတူးပါဘူးလို့ ဘယ်သူကမှအာမခံချက် မပေးပါဘူး။
စမ်းသပ်ရုံမျှသာဖြစ်တယ် တူးဖော်မှုမလုပ်ပါဘူးလို့ ယုံကြည်လောက်ဖွယ် တရားဝင်ပြောကြားချက်များမရှိတဲ့အတွက် ဒေသခံများအနေနဲ့ မိမိတို့ဒေသအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်လာနေတာလို့ မုံရွာမြို့ခံတစ်ဦးကပြောပါတယ်။
မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးပြဿနာ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းအဖြေရှာဖို့ တိုက်တွန်း
ဓာတ်ပုံ - ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန)၊ စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၉။
မြန်မာနိုင်ငံက အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာရဲ့ စိုးရိမ်ချက်တွေ တောင်းဆိုလိုလားချက်တွေကို ငြင်းဆန်နေမယ့်အစား ပကတိအခြေအနေမှန်ကို လက်ခံပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက တိုက်တွန်းပါတယ်။ ရခိုင်အရေး ပြည်ပက မျှတခြင်းမရှိတဲ့ တဖက်သတ် အကျပ်ကိုင် ဖိအားပေးမှုတွေကို မြန်မာဘက်က လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကုလညီလာခံမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးရဲ့ ပြောဆိုချက်အပေါ် အခုလို တုံ့ပြန် ပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ အပြည့်အစုံကို မဆုမွန်က စုစည်းတင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်တွေပါ တက်ရောက်နေတဲ့ ၄၇ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှာ မနေ့ စနေနေ့တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စား နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးက မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ပြည်ပကနေ မျှတခြင်းမရှိတဲ့ အကျပ်ကိုင်မှုတွေကို အရေးယူ တုံ့ပြန်မှာမဟုတ်သလို နိုင်ငံတကာခုံရုံး ICC က အရေးယူဖို့ အားထုတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ICC ဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူးလို့ ဝန်ကြီးက ပြောဆိုသွားခဲ့တာပါ။
ဒီအပေါ်မှာတော့ ပြည်သူက ရွေးချယ်ထားတဲ့ အရပ်သားအစိုးရလက်ထက် မြန်မာပြည်တွင်းက စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေမှာ ရှိနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ လုပ်ရပ်တွေအပေါ် နိုင်ငံတကာရဲ့ စိုးရိမ်ချက် စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေအပေါ် ပကတိ အခြေအနေမှန်ကို လက်ခံပြီး အကောင်းဆုံး အဖြေရှာဖို့ ကုလအပါအဝင် နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်နေပါပြီလို့ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေက ထောက်ပြ အကြံပြုကြပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေဘက်က ဒီမိုကရေစီအစိုးရတရပ် အနေနဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ဖို့ အချိန်တန်နေပါပြီလို့ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့ ညီမျှခြင်းမြန်မာရဲ့ ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်မျိုးမင်းက အခုလိုပြောပါတယ်။
“မနေ့တုန်းက ဦးကျော်တင့်ဆွေ အနေနဲ့ ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောကြားတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့က စောင့်ကြည့်တာရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောကြားတဲ့ပုံစံ တော်တော်များများက အရင်တုန်းက အစိုးရအတိုင်းပဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို လုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရေးယူမှုတွေကို လက်မခံဘူး၊ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အသိအမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အသံမျိုးဖြစ်တာ နည်းနည်းလေးတော့ ကျနော်တို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စကို နိုင်ငံတကာက ဥပဒေအရ ဖော်ဆောင်ပေးဖို့၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဆိုတဲ့ဟာက တောင်းဆိုနေတာလည်း ကြာပါပြီ။
“နောက်တခါ နိုင်ငံတကာက ထောက်ပြတဲ့ အချက်တွေက ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ တရားရေးစီရင်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊ ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ တရားဥပဒေက တကယ်တမ်း ချိုးဖောက်ခံရတဲ့သူတွေကို တိတိကျကျ မကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက် လက်ကမ်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို လုံးဝငြင်းဆိုတဲ့ သဘောမျိုး အသိအမှတ်ပြုဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ နိုင်ငံတကာက ပြောနေတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ICC အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဒီဟာကို တင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ပြောသွားတာ တကယ့် ပကတိအမြင်အတိုင်း မြင်ဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။”
ဒါ့အပြင် ကုလညီလာခံအတွင်း နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးကပဲ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ တဖက်သတ် ဖိအားပေးမှုတွေကို လက်မခံဘဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူညီချက်အတိုင်းသာ လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီလုပ်ရပ်ကို ဟန့်တားဖို့နဲ့ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို အမြတ်ထုတ်ဖို့အတွက် ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ရပ်တွေ ရှိနေတယ်လို့လည်း ပြောဆိုသွားတာပါ။
ဒီပြောဆိုချက်အပေါ် လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူ ဦးအောင်မျိုးမင်းက လူ့အခွင့်အရေး ဆိုးဆိုးရွားရွား ချိုးဖောက်ခံခဲ့ရသူတွေအတွက် သူတို့နေရပ်ရင်းပြန်လာချိန် လုံခြုံရေးအာမခံချက်ပေးဖို့ အပါအဝင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ နစ်နာမှုတွေအတွက် တရားဥပဒေနည်းလမ်းအရ မျှမျှတတ ရှိဖို့ကိုသာ ဒုက္ခသည်တွေကိုယ်စား ကုလနဲ့ နိုင်ငံတကာက တောင်းဆိုတာဖြစ်တယ်၊ ဒါဟာ ဖိအားပေးတာ၊ တဖက်သတ် အကျပ်ကိုင်တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ဖို့လိုတယ်လို့လည်း ထောက်ပြပါတယ်။
“ဒါမျိုးက ဖိအားပေးတာလည်း မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို နိုင်ငံတကာကနေ လုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေ အစောကြီးကတည်းက ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်။ ကိုဖီအာနန်တို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ကအစ နောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ အတွက် လမ်းကြောင်းတွေ ကမ်းလှမ်းထားတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအစိုးရဘက်က ဒါကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ လုပ်ဆောင်မယ့်နည်းလမ်း ရှာမယ့်အစား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မရှိသော နည်းလမ်းကို သုံးလာတယ်။
“သုံးလာတဲ့ကိစ္စမျိုး၊ ဥပမာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိ ခွင့်မပြုတာတွေ၊ နိုင်ငံတကာရဲ့ ပြောဆိုချက်ကို လုံးဝလက်မခံဘူးလို့ ဒါတွေကို သူတို့ရဲ့ ပေါ်လစီအရ ထုတ်ပြန်တာတွေ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထက် စာလို့ရှိရင် ငါလုပ်ဆောင်မယ်၊ ငါ့တိုင်းပြည် ငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဖြစ် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြင် ဥပဒေအရ အရေးယူတဲ့ လမ်းကြောင်းကို သူတို့ရှာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မြန်မာ့အရေး နိုင်ငံတကာရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရမှုအပေါ် သက်သေအထောက်အထား အချက်အလက်တွေ၊ သတင်းမှတ်တမ်းတွေပေါ် အခြေခံပြီး စနစ်တကျ ထောက်ပြနေကြတာ တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်လို့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာနဲ့ အပြုသဘော ပူးပေါင်းဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ ကနေဒါနိုင်ငံက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးညွန့်လှကလည်း အကြံပြုပါတယ်။
“နိုင်ငံတကာမြင်တဲ့ အမြင်ဆိုတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတကာက သူတို့ပြောတဲ့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံးမှာ တာဝန်ခံမှု၊ တာဝန်ယူမှုရှိတယ်။ ဒါကို အခုလက်ရှိ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သမ္မတရုံးတာဝန်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့တွေက မျက်စိပိတ်ပြီး ငြင်းနေရုံနဲ့ ပြဿနာက အဖြေမထွက်ဘူးဆိုတာကို သူတို့သိဖို့လိုတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခု လုပ်ရင်းလုပ်ရင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ သူတို့ရဲ့ ငြင်းဆိုချက်တွေအပေါ်မှာ ပိုပြီးတော့ အမြင်မကြည်ဖြစ်ပြီးတော့ တရစ်ပြီးတရစ် တရစ်ပြီးတရစ်သာ ပိုတိုးတဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာ ဖြစ်နေတာ နိုင်ငံအတွက် သိက္ခာကျတယ်။ နောက်တချက် အဆိုးဆုံးက အစိုးရအနေနဲ့က မြေပြင်ရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ဖြစ်ရပ်အမှန်တွေကို နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့်သာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ ကျနော်တို့က ယုံကြည်တယ်။”
ကုလနဲ့ နိုင်ငံတကာက ရိုဟင်ဂျာလို့သုံးနှုန်းတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအရေး အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးစိတ်ဆန္ဒရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်ဖို့ ဒေသတွင်း အာဆီယံနိုင်ငံတချို့နဲ့ ကုလဘက်က ဒီညီလာခံမှာ တိုက်တွန်း ပြောဆိုနေပါတယ်။ တဖက်မှာ ဒီလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတကာခုံရုံးအထိ စစ်ဆေးအရေးယူဖို့ တိုက်တွန်းမှုတွေလည်း ရှိနေတာပါ။ မြန်မာအစိုးရကတော့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အစီရင်ခံစာတွေဟာ တဖက်သတ်ဆန်ပြီး အချက်အလက်မှားတွေကို အခြေခံထားတယ် လို့လည်း တောက်လျှောက် ငြင်းဆိုနေပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို လက်မခံသလိုဘဲ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းရေးမှူးတွေကိုလည်း ပြည်ဝင်ခွင့် မပေးခဲ့ပါဘူး။
မွနျမာ့လူ့အခှငျ့အရေးပွဿနာနိုငျငံတကာနဲ့ ပူးပေါငျးအဖွရှောဖို့ တိုကျတှနျး
မွနျမာနိုငျငံက အထူးသဖွငျ့ ရခိုငျပွညျနယျတှငျးက လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး နိုငျငံတကာရဲ့ စိုးရိမျခကျြတှေ တောငျးဆိုလိုလားခကျြတှကေို ငွငျးဆနျနမေယျ့အစား ပကတိအခွအေနမှေနျကို လကျခံပွီး နိုငျငံတကာနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ မွနျမာ့လူ့အခှငျ့အရေး လှုပျရှားသူတှကေ တိုကျတှနျးပါတယျ။ရခိုငျအရေး ပွညျပက မြှတခွငျးမရှိတဲ့ တဖကျသတျ အကပျြကိုငျ ဖိအားပေးမှုတှကေို မွနျမာဘကျက လကျခံမှာမဟုတျဘူးဆိုတဲ့ ကုလညီလာခံမှာ နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံး ဝနျကွီးရဲ့ ပွောဆိုခကျြအပျေါ အခုလို တုံ့ပွနျ ပွောဆိုခဲ့ကွတာပါ။ အပွညျ့အစုံကို မဆုမှနျက စုစညျးတငျပွပေးထားပါတယျ။
မွနျမာအစိုးရ ကိုယျစားလှယျတှပေါ တကျရောကျနတေဲ့ ၄၇ ကွိမျမွောကျ ကုလသမဂ်ဂ အထှထှေညေီလာခံမှာ မနေ့ စနနေတေု့နျးက မွနျမာနိုငျငံကိုယျစား နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံးဝနျကွီးက မိနျ့ခှနျးပွောကွားစဉျ ရခိုငျပွညျနယျအရေး ပွညျပကနေ မြှတခွငျးမရှိတဲ့ အကပျြကိုငျမှုတှကေို အရေးယူ တုံ့ပွနျမှာမဟုတျသလို နိုငျငံတကာခုံရုံး ICC က အရေးယူဖို့ အားထုတျမှုနဲ့ ပတျသကျပွီးလညျး ICC ဟာ မွနျမာနိုငျငံအပျေါ တရားစီရငျပိုငျခှငျ့ မရှိဘူးလို့ ဝနျကွီးက ပွောဆိုသှားခဲ့တာပါ။
ဒီအပျေါမှာတော့ ပွညျသူက ရှေးခယျြထားတဲ့ အရပျသားအစိုးရလကျထကျ မွနျမာပွညျတှငျးက စိုးရိမျစရာ အခွအေနမှော ရှိနတေဲ့ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုတှေ၊ လုပျရပျတှအေပျေါ နိုငျငံတကာရဲ့ စိုးရိမျခကျြ စုံစမျးစဈဆေးပေးဖို့ တောငျးဆိုမှုတှအေပျေါပကတိ အခွအေနမှေနျကို လကျခံပွီး အကောငျးဆုံး အဖွရှောဖို့ ကုလအပါအဝငျ နိုငျငံတကာနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျသငျ့နပေါပွီလို့ လူ့အခှငျ့အရေး လှုပျရှားသူတှကေ ထောကျပွ အကွံပွုကွပါတယျ။
မွနျမာအစိုးရ တာဝနျရှိသူတှဘေကျက ဒီမိုကရစေီအစိုးရတရပျ အနနေဲ့ လုပျသငျ့လုပျထိုကျတဲ့ အလုပျကို လုပျဖို့ အခြိနျတနျနပေါပွီလို့ မွနျမာ့လူ့အခှငျ့အရေး လှုပျရှားသူတဦးဖွဈတဲ့ ညီမြှခွငျးမွနျမာရဲ့ ဒါရိုကျတာ ဦးအောငျမြိုးမငျးက အခုလိုပွောပါတယျ။
“မနတေု့နျးက ဦးကြျောတငျ့ဆှေ အနနေဲ့ ဒီဟာနဲ့ပတျသကျပွီး ပွောကွားတဲ့အခါမှာ ကနြျောတို့က စောငျ့ကွညျ့တာရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွောကွားတဲ့ပုံစံ တျောတျောမြားမြားက အရငျတုနျးက အစိုးရအတိုငျးပဲ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုကို လုပျဆောငျတာမဟုတျဘဲနဲ့ နိုငျငံတကာနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အရေးယူမှုတှကေို လကျမခံဘူး၊ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး အသိအမှတျပွုမှာ မဟုတျဘူးဆိုတဲ့ အသံမြိုးဖွဈတာ နညျးနညျးလေးတော့ ကနြျောတို့ စိတျမကောငျးဖွဈစရာ ဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးကိစ်စကို နိုငျငံတကာက ဥပဒအေရ ဖျောဆောငျပေးဖို့၊ စုံစမျးစဈဆေးမှုတှေ လုပျဆောငျဖို့ ဆိုတဲ့ဟာက တောငျးဆိုနတောလညျး ကွာပါပွီ။
“နောကျတခါ နိုငျငံတကာက ထောကျပွတဲ့ အခကျြတှကေ ပွညျတှငျးမှာရှိနတေဲ့ တရားရေးစီရငျမှု လုပျထုံးလုပျနညျးတှေ၊ ပွညျတှငျးမှာရှိနတေဲ့ တရားဥပဒကေ တကယျတမျး ခြိုးဖောကျခံရတဲ့သူတှကေို တိတိကကြ မကာကှယျပေးနိုငျတဲ့ အတှကျကွောငျ့မို့လို့ နိုငျငံတကာနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့အတှကျ လကျကမျးတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါကို လုံးဝငွငျးဆိုတဲ့ သဘောမြိုး အသိအမှတျပွုဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုး ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ နိုငျငံတကာက ပွောနတေဲ့ နိုငျငံတကာ ရာဇဝတျဆိုငျရာ စုံစမျးစဈဆေးမှုတှေ လုပျဆောငျဖို့အတှကျမှာ မွနျမာနိုငျငံက ICC အဖှဲ့ဝငျ မဟုတျတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့ ဒီဟာကို တငျလို့မရဘူးဆိုတဲ့ သဘောမြိုး ပွောသှားတာ တကယျ့ ပကတိအမွငျအတိုငျး မွငျဖို့တော့ လိုအပျပါတယျ။”
ဒါ့အပွငျ ကုလညီလာခံအတှငျး နိုငျငံတျောအတိုငျပငျခံရုံး ဝနျကွီးကပဲ မွနျမာနိုငျငံအနနေဲ့ ရိုဟငျဂြာဒုက်ခသညျအရေးကို ကိုငျတှယျဖွရှေငျးရာမှာ နိုငျငံတကာရဲ့ တဖကျသတျ ဖိအားပေးမှုတှကေို လကျမခံဘဲ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့-မွနျမာ နှဈနိုငျငံ သဘောတူညီခကျြအတိုငျးသာ လုပျဆောငျသှားမှာဖွဈတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ဒီလုပျရပျကို ဟနျ့တားဖို့နဲ့ ဒုက်ခရောကျနသေူတှကေို အမွတျထုတျဖို့အတှကျ ဖကျြလိုဖကျြဆီး လုပျရပျတှေ ရှိနတေယျလို့လညျး ပွောဆိုသှားတာပါ။
ဒီပွောဆိုခကျြအပျေါ လူ့အခှငျ့အရေးလှုပျရှားသူ ဦးအောငျမြိုးမငျးက လူ့အခှငျ့အရေး ဆိုးဆိုးရှားရှား ခြိုးဖောကျခံခဲ့ရသူတှအေတှကျ သူတို့နရေပျရငျးပွနျလာခြိနျ လုံခွုံရေးအာမခံခကျြပေးဖို့ အပါအဝငျ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ နဈနာမှုတှအေတှကျ တရားဥပဒနေညျးလမျးအရ မြှမြှတတ ရှိဖို့ကိုသာ ဒုက်ခသညျတှကေိုယျစား ကုလနဲ့ နိုငျငံတကာက တောငျးဆိုတာဖွဈတယျ၊ ဒါဟာ ဖိအားပေးတာ၊ တဖကျသတျ အကပျြကိုငျတာ မဟုတျဘူးဆိုတာ နားလညျဖို့လိုတယျလို့လညျး ထောကျပွပါတယျ။
“ဒါမြိုးက ဖိအားပေးတာလညျး မဟုတျဘူးခငျဗြ။ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရကို နိုငျငံတကာကနေ လုပျသငျ့တဲ့အခကျြတှေ အစောကွီးကတညျးက ကမျးလှမျးထားပါတယျ။ ကိုဖီအာနနျတို့ စုံစမျးစဈဆေးရေး ကျောမရှငျကအစ နောကျပိုငျးမှာ တဖွညျးဖွညျး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ အတှကျ လမျးကွောငျးတှေ ကမျးလှမျးထားတယျ။ ဒါပမေယျ့ လကျရှိအစိုးရဘကျက ဒါကို ပူးပေါငျးဆောငျရှကျဖို့ လုပျဆောငျမယျ့နညျးလမျး ရှာမယျ့အစား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှု မရှိသော နညျးလမျးကို သုံးလာတယျ။
“သုံးလာတဲ့ကိစ်စမြိုး၊ ဥပမာ စုံစမျးစဈဆေးရေးအရာရှိ ခှငျ့မပွုတာတှေ၊ နိုငျငံတကာရဲ့ ပွောဆိုခကျြကို လုံးဝလကျမခံဘူးလို့ ဒါတှကေို သူတို့ရဲ့ ပျေါလစီအရ ထုတျပွနျတာတှေ ကွညျ့မယျဆိုရငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုထကျ စာလို့ရှိရငျ ငါလုပျဆောငျမယျ၊ ငါ့တိုငျးပွညျ ငါလုပျမယျဆိုတဲ့ ပုံစံမြိုး ဖွဈနတေယျ။ အဲဒါမြိုးဖွဈလို့ရှိရငျတော့ ဒီကိစ်စနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ နိုငျငံတကာ လုပျထုံးလုပျနညျးအဖွဈ စုံစမျးစဈဆေးမှုအပွငျ ဥပဒအေရ အရေးယူတဲ့ လမျးကွောငျးကို သူတို့ရှာကွမှာ ဖွဈပါတယျ။”
မွနျမာ့အရေး နိုငျငံတကာရဲ့ စိုးရိမျမှုတှကေ လူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျခံရမှုအပျေါ သကျသအေထောကျအထား အခကျြအလကျတှေ၊ သတငျးမှတျတမျးတှပေျေါ အခွခေံပွီး စနဈတကြ ထောကျပွနကွေတာ တောငျးဆိုနကွေတာဖွဈလို့ မွနျမာအစိုးရအနနေဲ့ နိုငျငံတကာနဲ့ အပွုသဘော ပူးပေါငျးဖွရှေငျးသငျ့တယျလို့ ကနဒေါနိုငျငံက မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီရေး လှုပျရှားသူတဦးဖွဈတဲ့ ဦးညှနျ့လှကလညျး အကွံပွုပါတယျ။
“နိုငျငံတကာမွငျတဲ့ အမွငျဆိုတဲ့နရောမှာ နိုငျငံတကာက သူတို့ပွောတဲ့ ဆိုတဲ့ ကိစ်စတှအေားလုံးမှာ တာဝနျခံမှု၊ တာဝနျယူမှုရှိတယျ။ ဒါကို အခုလကျရှိ ကုလသမဂ်ဂ ကိုယျစားလှယျပဲဖွဈဖွဈ၊ သမ်မတရုံးတာဝနျခံ ပုဂ်ဂိုလျတှပေဲဖွဈဖွဈ သူတို့တှကေ မကျြစိပိတျပွီး ငွငျးနရေုံနဲ့ ပွဿနာက အဖွမေထှကျဘူးဆိုတာကို သူတို့သိဖို့လိုတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ အခု လုပျရငျးလုပျရငျးနဲ့ နိုငျငံတကာရဲ့ သူတို့ရဲ့ ငွငျးဆိုခကျြတှအေပျေါမှာ ပိုပွီးတော့ အမွငျမကွညျဖွဈပွီးတော့ တရဈပွီးတရဈ တရဈပွီးတရဈသာ ပိုတိုးတဲ့ ဝဖေနျသုံးသပျမှုတှေ မွနျမာနိုငျငံအပျေါမှာ ဖွဈနတော နိုငျငံအတှကျ သိက်ခာကတြယျ။ နောကျတခကျြ အဆိုးဆုံးက အစိုးရအနနေဲ့က မွပွေငျရဲ့ အခွအေနနေဲ့ ဖွဈရပျအမှနျတှကေို နိုငျငံတကာနဲ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျး အားဖွငျ့သာလြှငျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ အခွအေနအေရပျရပျကို ဖွရှေငျးနိုငျမယျလို့ ကနြျောတို့က ယုံကွညျတယျ။”
ကုလနဲ့ နိုငျငံတကာက ရိုဟငျဂြာလို့သုံးနှုနျးတဲ့ ဒုက်ခသညျတှအေရေး အစိုးရအနနေဲ့ နိုငျငံရေးစိတျဆန်ဒရှိရှိနဲ့ လုပျဆောငျဖို့ ဒသေတှငျး အာဆီယံနိုငျငံတခြို့နဲ့ ကုလဘကျက ဒီညီလာခံမှာ တိုကျတှနျး ပွောဆိုနပေါတယျ။ တဖကျမှာ ဒီလူ့အခှငျ့အရေး ခြိုးဖောကျမှုတှနေဲ့ ပတျသကျလို့ နိုငျငံတကာခုံရုံးအထိ စဈဆေးအရေးယူဖို့ တိုကျတှနျးမှုတှလေညျး ရှိနတောပါ။ မွနျမာအစိုးရကတော့ နိုငျငံတကာ လူ့အခှငျ့အရေး အစီရငျခံစာတှဟော တဖကျသတျဆနျပွီး အခကျြအလကျမှားတှကေို အခွခေံထားတယျ လို့လညျး တောကျလြှောကျ ငွငျးဆိုနပေါတယျ။ မွနျမာအစိုးရအနနေဲ့ ရိုဟငျဂြာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးကို လကျမခံသလိုဘဲ ကုလသမဂ်ဂ လူ့အခှငျ့အရေး စုံစမျးရေးမှူးတှကေိုလညျး ပွညျဝငျခှငျ့ မပေးခဲ့ပါဘူး။